ဗီဒီယိုက ချက်တင် ပြင်သစ်
အသစ်အစီရင်ခံတင်ပြဖို့ပြင်သစ်အစိုးရကိုလာမယ့်နေ့ရက်ကာလ၌၊ဒေသခံမီဒီယာအစီရင်ခံ။ အဆိုပါအစီအစဉ်လာမှအစည်းအလုပ်အဖွဲ့စုံဖြင့်ချီပြင်သစ်ရဲ့အတွင်းရေးမှူးပြည်နယ်တန်းတူရေးအတွက်၊ ။ နိုင်ငံရေးသမားနောက်အဆိုပြုချက်ကိုအကြံပြုလူတန္းမျိုးသမီးလှုပ်ရှားမှု၏လွတ်လပ်ခွင့်အတွက်အများပြည်သူအာကာသသင့်မျက်နှာကိုအနည်းဆုံးများအသောသူတို့အဘို့အပေါ်ပေးဆောင်နိုင်၊အစက်အပြောက်။ ပါကဒဏ်ငွေဖြစ်ပါသည်၊ဒါကြောင့်ရောက်ရှိနိုင်ကြောင်း၊အစီရင်ခံစာကပြောပါတယ်။ စာရွက်စာတမ်းတင်ပြပါလိမ့်မယ်အ ၊ဝန်ကြီး၏တရားမျှတမှုကိုရှာရန် ၊နှင့်ဝန်ကြီးများ၏အတွင်းပိုင်းရတ်ဘို။ ကနဦးေ အဆိုပါဥပဒေအောက်တိုဘာလအတွက်ဟုအကြောင်းလမ်းပေါ်နှောင့်ယှက်ရမည်အပြစ်ပေး။ ထိုနှစ်အရွယ်ကိုယ္တိုင္ဟာအဖွဲ့နှင့်နီးကပ်ပြင်သစ်သမ္မတ ၊အဘယ်သူသည်တစ်ချိန်ကကပြောပါတယ်သောနှောင့်ယှက်ဖြစ်နိုင် ဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်တစ်ဦးရိုးရှင်းတဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်တစ်ဦးကိုချက်ချင်းတုန့်ပြန်သည့်အခါတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ -စာမ်က္ႏွာအစီရင်ခံခဲ့ၾကသည္ကိုအမ်ားျ၊ဒါကြောင့်မသိရသေးအရာကို၎င်း၏စာရေးဆရာအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရ၏ဥပမာတစ်ခုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရွံရှာဆီသို့ဦးတည်အမျိုးသမီး။ မည်ညွှန်း-ပြင်သစ်သတင်းစာသောကိုမြင်လျှင်အစီရင်ခံစာ၊ေျပာတဲ့အောက်ပါအမျိုးသမီးတစ်ဦး၊သူမ၏ဖုန်းနံပါတ်နှင့်ချွန်မှာသူမ၏အနိုင်လုံးပေးအဖြစ်၊အမရအောင်ကျယ်သဘောထားမှတ်ချက်အကြောင်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးထည့္ပါ။ ဤအချက်များအားလုံးဖြစ်ပျက်မပြုမီကဲ့နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချေမှုန်းရေး၊အရာပြီးသားအပြစ်အားဖြင့်အဆိုပါဥပေဒ၊ေျပာ ပုရွက်ဆိတ်တစ်စု၏အစာရေးဆရာများနောက်ကွယ်မှအစီရင်ခံ။ ပုရွက်ဆိတ်အကြောင်းကရှင်းပြသည်အတိုင်းလိုအပ်သောဖြစ်အဖြစ်ရှိတီရဲအရာရှိတိုင်းထောင့်ပေါ်မှာရပ်တန့်ရန်တိုင်း ။ သည်နှင့်အညီအမြင့်ကောင်စီအတွက်တန်းတူညီမျှအမျိုးသမီးအကြား နှင့်အမျိုးသားများ၊အမျိုးသမီးရာခိုင်နှုန်းတောင်းဆိုခဲ့ကြယှက်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်နှင့်အတူ၊ထိုမေးခွန်းဖြစ်ခြင်းထက်အသက်ငယ်အသက်အနှစ်။ အတည်ပြုလိုက်လျှင်၊ထိုအဆိုပြုချက်ကိုတင်ပြပါလိမ့်မယ်မှာမန်နင်အတွက်အမျိုးသားညီလာခံနှင့်အထက်လွှတ်တော်ဒီနှစ်။ ကိုလက်ခံရရှိမီအစီရင်ခံစာ၊ ညွှန်ပြသူမမျက်နှာပင်အကောင်းတိုင်းပြောပြ သတင်းရုပ်သံလိုင်းတစ်ဒဏ်ငွေနည်းနည်းနည်း။ ဝေဖန်သူများ၏အတိုင်းလည်းပြောစေခြင်းငှါမသွားဝေးလုံလောက်မည်အမှတ်သင်္ကေတ။ တဲ့ရဲအရာရှိကဦးခင္လိႈင္ကအမျိုးသမီးတစ်ဦး၊ ၊တည်ထောင်သူ၏လစာတတပ်မှ အုပ်စုစာရင်းပြုစုသော၊သက်သေများ၏နှောင့်ယှက်အမျိုးသမီးကပြောဌစုံစမ်းသတင်းစာ။ ပြင်သစ်မီဒီယာ၊သို့သော်၊မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြပုံကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရွံရှာမရဖြစ်ကွဲကွာနေရော။ သစ္တင္ပို ပးသည္၊အခြားစာရေးဆရာများ၏အစီရင်ခံစာ၊ခဲ့သည်စွပ် အားဖြင့်အဖြေ:အသှေးကိုလုပ်ဆောင်သင့်ဆက်ဆံရေးတွင်အများနှင့်တန်းတူမစိုး။ အစောပိုင်းက၊ဇန်နဝါရီလတွင်ပဲရစ်မြို့အာဏာပိုင်တစ်ဦးကြေညာ အသစ်အတိုင်းကိုင်တွယ်ရန်နှောင့်ယှက်ပေါ်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး။ ခရီးအပေါ်အချို့သောဘတ်စ်ကားများယခုအခွင့်အလမ်းရှိသည်ဖို့ဟော့ပယ်မှာညဉ့်အခါ၌ပင်မော်တော်ယာဉ်ကိုမသတ်မှတ်ထားသောရပ်တန့်။ စဉ်ကိုဆန့်ကျင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်ဆက်လက်အရှိန်အဟုန်စုဆောင်းရန်၊ကမ္ဘာအနှံ့မြောက်မြားစွာအင်္ဂလိပ်နာမည်ကြီးတွေသုံဆန့်ကျင် ။ ကက် ၊ နှင့် ဇာတ်များမှာကြားဘူးသောသူတို့မိမိတို့ကိုယ်ကိုစဉ်းစားခံရဖို့ နှင့်ပြောသောပရောနှင့်အတူအမျိုးသမီးအလိုက်။
အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့။ ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီမေတ္တာကိုရှာတွေ့မှပေါ်။ ဂုဏ်ယူမဟုတ်တဲ့အကြောင်းသင်ကနားကြားဖို့မျှော်လင့်၊ဖြစ်ရှိနေဆဲအချို့သောအမည်းမှပူးတွဲလှိုင်းမှတဆင့်အွန်လိုင်းဦးခ်င္းအတွက်ပေါင်းသင်း။ အခမဲ့ချက်တင်အခန်းပေါင်းမပါဘဲမှတ်ပုံတင်နိုင်မည့်အွန်လိုင်းချက်တင်နှင့်အသစ်တွေ့ဆုံရန်မှလူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာအခမဲ့ချက်တင်၊အဘယ်သူမျှမ။ အခမဲ့ချက်တင်။ အခမဲ့ချက်တင်အကြောင်းဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးသည်ဆိုးရွားထက် ပေးဆောင်ချက်တင်ဖြစ်ပါတယ်၊ဒါကြောင့်ကိုယ့်စကားပြောမပါဘဲရေးနှင့်ကူးသန်းနှင့်လူမျိုးအဘို့ဖန်ဆင်းထားသည်။ ကျနော်တို့ကြိုးစားသင်ဖို့ကသက်သေပြပေး၏အမြင့်ဆုံးဆက်သွယ်ရေး၊သင်ရနိုင်ပါကတစ်ပြားဖြုန်းခြင်းမရှိဘဲ။ အများစုကအဘို့အရှာကြသည်ကိုအခမဲ့ချက်တင်အဘယ်သူမျှမမတော်တဆမှုဖြစ်သောကြောင့်၊လူတိုင်းသည်လိုရလွယ်ကူပြီးမြန်ဆန်နည်းလမ်းရှာတွေ့မှလူတစ်ဦးမှပြောဆို။ နှင့်-အခမဲ့ကျပန်းအွန်လိုင်းချက်တင်အခန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲအွန်လိုင်းချက်တင်အခန်းပေါင်း၊လွတ်လပ်မှု၊ဧည့်သည်၊ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲ။ ။ အတွက်အခမဲ့ အတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း မိတ်ဆွေတို့ကိုကြိုက်သူကျပန်းစကားပြောမပါဘဲ။ ပူးပေါင်းဖို့အကောင်းဆုံးအခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်အတွက်။ အခမဲ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်ပူးပေါင်းပြီးဒေသခံတစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်လင္တြင္အရင္ဝင္ရ်္။ ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳမှန်ရောနှော။ ကျနော်တို့အပြည့်အဝ-အထူးအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုက်အတွက်တစ်ဦးတစ်။ ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳအွန်လိုင်းချက်တင်၊စိတ်လှုပ်ရှားစရာလူမှုအွန်လိုင်းချက်တင်အသိုင်း’ကွန်ယက်အရာအခမဲ့အွန်လိုင်းချက်တင်ဆိုဒ်များ။ ဒီနေရာမှာသင်သည်ချက်တင်စကားပြောနိုင်ခြင်းမရှိဘဲအွန်လိုင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း။ အခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမတက်လက်မှတ်ထိုးရန်လိုအပ်၊နှစ်သက်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နှင့်အတူစကားပြောအကောင်းဆုံးချက်တင်ဆိုက်များနှင့်ဗီဒီယိုချက်တင်ဆိုဒ်များ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အွန်လိုင်းချက်တင်အခန်းပေါင်းသင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လုံးဝအသစ်ခင်မင်ရင်းနှီးနှင့်ဆက်ဆံရေး၌ထားခဲ့ဖို့မလိုဘဲ။ ရေပန်းစားအတွက်အခမဲ့အခန်းပေါင်းစကားပြောခန်း၊သူတို့အလုပ်လုပ်မပါဘဲမှတ်ပုံတင်၊မပေးဖို့တောင်းဆိုမဆိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသေးစိတ်။ ထိပ်ချောင်းဆိုဒ်များတစ်ဦးပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါသည်ရှိရာအဝင်အများဆုံးနာမည်ကြီးချောင်းဝက်ဘ်ဆိုက်များသင်လုပ်နိုင်အဖြစ်ထိပ်ဆုံးစာရင်းကိုကြည့်ရှုချောင်းကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေ။။။။။ ကျနော်တို့အမျိုးမျိုးသောစုဆောင်းခြင်းအားဖြင့်ထိပ်တန်းအဆင့်သတ်မှတ်ပြီးကောက်ခံမှအချက်အလက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ထိပ်အကြောင်းရှာယာကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်သူတို့ကိုသင်တို့အဘို့အ။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ခြင်း(သို့မဟုတ်အင်တာနက်ကိုချိန်းတွေ့)စနစ်ကပေးနိုင်တဲ့လူတွေကိုရှာဖွေပြီးမိမိတို့ကိုယ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးရန်အသစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်သွယ်မှုများအင်တာနက်ကိုကျော်များသောအားဖြင့်ရည်မှန်းချက်နှင့်အတူဖွံ့ဖြိုးဆဲ၏ကိုယ္ေ၊ရင်ခုန်စရာသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေး။ အွန်လိုင်းမှချိန်းတွေ့ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းတိကျသောယန္တရား(ယေဘုယျအားဖြင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့မဟုတ်)အတွက်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့များအသုံးပြုခြင်းမှတဆင့်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ငါးချိန်းတွေ့သည်ဗြိတိန်ချိန်းတွေ့ဆိုက်၏ဝန်နှင့်အတူငါးကိုကနေရွေးချယ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ များစွာသောပိုပြီးဗြိတိန်အဖွဲ့ဝင်များအတွက်ရှာဖွေနေချိန်းတွေ့-အခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း
တိုင်းကြားဆက်ဆံရေးစတင်မိတ်ဆက်နှင့်အတူ၊နှင့်အကျွမ်းရလူနှင့်အတူကောင်းစွာလုံလောက်စွာ၊သိက္ခာနှင့်နှစ်လိုဖွယ်အတွေ့အကြုံ။ ဖတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချို့သောအကြံပေးချက်များ၊နှင့်အတူရင်ဆိုင်ရွေးချယ်မှုတစ်ခု၊ယုံကြည်သောဤအခက်ခဲပြီးအလွန်တာဝန်ရှိကိုင္။ သို့သော်ဤအတွက်အများအပြားအခြေအနေမှဝေး။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ထိုသို့ဖြစ်ပျက်သောအလာလွယ်ကူပြီးသာယာသောရွေးချယ်ဖို့အထူးသဖြင့်အခါ၊ရွေးချယ်မှုကိုကြီးလှပေ၏။ ချိန်းတွေ့ဖို့၊အမျိုးသမီးမပေါ်တိကျတဲ့အမြင်မှိုင်းသတ်မှတ်ထားသည်။ သူမ၏ကံကြမ္မာနိုင်၏ကံကြမ္မာအရှင်သို့မဟုတ်အစာရှောင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်၊သူမသည်အဝိုင်းအားဖြင့်အမျိုးသားများနှင့်အတူအတိုဆံပင်သို့မဟုတ်ရှည်သောဆံပင်။ ဒါပေမယ့် အရေးအပါဆုံးသောရွေးချယ်မှုနှင့်အလုပ်အားဖြင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦး။ ဟုတ်ပါတယ်၊အချိန်ကြာမြင့်စွာအဘို့ပြီးသားအောင်မြင်သည့်အခါထိုကာလအမိန်းကလေးများမှာဝင်းဒိုးနဲ့စောင့်ဆိုင်းချိန်အကြာကြီးများအတွက်သူမ၏သင့်တော်ပျင်း။ ယနေ့အချိန်တွင်၊အမျိုးသမီး့ဏာမခြေလှမ်းသည်ဖက်ရှင်အတွက်၊အရာမမှာအားလုံးထင်ရတဲ့အရာတစ်ခုခုဖြစ်၏။ ထိုဆန့်ကျင်တွင်၊အဘယ်သူမိန်းကလေးတစ်ကြောက်လန့်ခြင်းမရှိယူမှအစပြုယူပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းအဘို့အချိန်းတွေ့စဉ်းစားသည်အလွန်စိတ်အေးလက်အေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ။ အပြုသဘောစဉ်းစားသည်လျှို့ဝှက်သောတိုင်းမိန်းကလေးအိပ်မက်အရသိကျွမ်းနှင့်အတူအဆင်းလှသောမင်းသားနှင့်အတူတစ်ဦးချစ်စရာအသွင်အပြင်သို့မဟုတ်အထူပိုက်ဆံအိတ်။ ဒါပေမယ့်ခင်မင်သိကျွမ်းရ၊စည်းကမ်းအတိုင်းသာတစ်ဦးချင်းစီအပိုနှစ်သက်၊လက်တွေ့နှင့်အတူ၏အသွင်အပြင်ကြာရှည်သို့မဟုတ်စုပေါင်းလယ်ယာလုိက္တယ္။ ။ တွန်းအားပေးအဘယ်ကြောင့်ဒါကြောင့်အရာအားလုံးမျှတ။ အဘယ်သူသည်ထိုအခါရသူတို့အားအများဆုံးချောမော။ ဘယ်လောက်လုပ်နိုင်သူတို့ဟာသူတို့ကိုဆွဲဆောင်ဖို့သူတို့ကိုယ်သူတို့? ငါတို့၏အကြံပေးချက်ကိုလိုက်နာရန်အဘယ်သူသည်မိန်းကလေးငယ်များဖြစ်ကြောင်းရှက်ဖို့ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းကိုယူ။ ခပ်သိမ်းသောအချိန်အခါလူငယ်တစ်ဦးသောသူသည်ကြိုးစားနှင့်တွေ့ဆုံ၊အဘယ်သူ၏အသွင်အပြင်မဆွဲဆောင်သင်မှာအားလုံး၊သင်အများဆုံးဖွယ်ရှိဆန္ဒရှိ သူ့ကိုလူအပေါင်းတို့သည်အကောင်းဆုံးစဉ်းစားဖို့ကိုယ်တော်တိုင်အကြောင်းလူတို့ရိုးရှင်းစွာတည်ရှိပါဘူး။ ခြင်ဒီလိုမျိုး၊သင်ဖြစ်ကောင်းရှိသည်မဟုတ်စဉ်းစားသောအပိုပြီးဤအကြံအစည်လောကသင့်ရဲ့ဦးခေါင်း၌၊နည်းနည်းအခွင့်အလမ်းရှိသည်ဖို့ကျန်ရစ်ကျွမ်းရမှာနောက်ဆုံးကောင်လေးနှင့်အတူသင့်ရဲ့အိပ်မက်တွေကို၏။ အကွံ၏တန်ခိုးကိုရိုးရိုးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်၊နှင့်အားဖြင့်ပရိုဂရမ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထီးကျန်၊သင်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတင်းအကျပ်ခံရ။ သဘာဝကျကျ၊ထိုကဲ့သို့သောအကြံအစည်မထပဲလိုကြောင်း၊ဒါကြောင့်ဖြစ်ပျက်၊အများဆုံးဖွယ်ရှိသည်၊တစ်ဦးရလဒ်အဖြစ်အချို့သောဝမ်းနည်းဖွယ်ဖြစ်ရပ်များ။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကသင်၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံသို့မဟုတ်ဝမ်းနည်းဖွယ်အတွေ့အကြုံသင်သည်သင်၏ရည်းစားတစ်ဦးအတွက်ရလဒ်၊ပိုး၏အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှု။ ထက်ကျော်လွန်သွားကြဖို့၊ဒါကြောင့်လိုအပ်သည် ၏သင်တန်းကိုပြောင်းလဲသူ၏အကြံအစည်၊မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အမျိုးသားပတ်ပတ်လည်သင်အလှ၊ချမ်းသာနှင့်ဂုဏ်သရေရှိတဲ့လူတွေ။ သင်ဆွဲဆောင်နိုင်သူတို့နှင့်အတူသင့်ရဲ့အလှအပ။ အစည်းအဝေးအချက်အချို့မိန်းကလေးများအခါကိုဆွေးနွေးတဲ့ကိစ္စအရကျွမ်းတဲ့လူကိုအလွန်ကြိုက်ထပ်အစီစဥ္မႈ-လမ္းထဲငါ ဖြည့်ဆည်းကြဘူး။ သော်လည်းဤနေရာမဟုတ်အဆိုးဆုံးရယူခြင်းများအတွက်အကျွမ်းနှင့်အတူတစ်လျောက်ပတ်သောယောက်ျားသည်။ ဘယ်နေရာနှင့်အခြေအနေကိုစဉ်းစားအဖြစ်ရနိုင်အဘို့အသင့်လျော်ဆုံးပထမဦးဆုံးအစည်းအဝေး? သည်နိုင်ရန်အတွက်ရည်းစားရှာတွေ့ဖို့အသီးအသီးအခြားအလွန်အရေးခံရဖို့ညာဘက်အချိန်တွင်ညာဘက်ကိုရာအရပျ၌။ တွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်အာရုံစိုက်ဖို့သူ့ဟာသူအားဖြင့်ရိုးရိုးလမ္း၊အလုံအလောက်လမ်းလျှောက်ဖို့လမ်းတစ်လျှောက်အလုပ်များတားမ်ား၏ဗဟိုပန်းခြံ။ နှင့်မျက်မှောက်တော်၌မှာကောင်းတဲ့လူငယ်တစ်ဦးသည်လူ၊မလှည့်သွားမကြည့်ပါဘူး။ ထိုဆန့်ကျင်တွင်၊မှာကြည့်ရှုသူ့ကိုနှင့်ပြုံး။ အများစုကတော့၊ဒီလူတွေတော့တက်လာရန်မိမိတို့အဖို့ခင်မင်သိကျွမ်းရပြီး၊ဤအစမ်းသပ်လေ့အကျင့်အတွက်။ ကြပြီမဟုတ်၊သငျသညျအစဉ်အမြဲဖူးအကျွမ်း။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်၊တစ်ခုခုမှားယွင်းနေသည်နှင့်အတူသင့်ရဲ့လိင်။ ကြိုးစားကြည့်မှန်ထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှာနှင့်ပြုံး။ သင့်ရဲ့အပြုံးအမှန်တကယ်ရင်းမှန်နှင့်အမြင်ကိုလောင်? သင်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ကြောင်းသင်မြင်တဲ့အတွက်ကြေးမုံပုံရိပ်ကိုအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်အတူမိမိကိုယ်ကိုနှင့်အတူသူမ၏အသက်တာ။ မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့၊ထိုအခါလူအပေါင်းတို့ကိုလှည့်ပတ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ယုံကြည်ရန်အထိသင်ခံစားရ ဖစ္လာတယ္။ ထို့အပြင်အပေါ်ချိန်းတွေ့ဖို့လမ်းပေါ်သို့မဟုတ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်ကြီးမားတဲ့အရေအတွက်၏ထိရောက်သောအရပ်၊ဘယ်မှာငါအခွင့်အလမ်းရှိသည်။ ရကျွမ်းနှင့်အတူတစ်ဦးကိုခံထိုက်သောသူ။ ဥပမာအားဖြင့်၊အားကစားကလပ်အသင်း။ ရှိပါတယ်၊တစ်ဦးအုပ်ချုပ်အဖြစ်၊တူညီသောလူများပတ်ပတ်လည်လမ်းလျှောက်၊မည်သူမေ့သင်တို့၌အစဉ်နှင့်စတင်ဖလှယ်သင်တို့နှင့်အတူအတို ။ ဤအချက်မှာပါ၊ဒါဟာအလွန်အရေးပါအရောအနည်းငယ်ထည့်သွင်းခြင်း၊တစ်ဦးမီးပွားမှ၊သင်၏မျက်စိကြောင်းအတူသင်တို့ပေးသွားမှာပါမှဖိတ်တဲ့။ အပြင်အားကစားကလပ်ရှိနေဆဲအများအပြားလူဦးရေနေရာများ၊ကဲ့သို့ပြပွဲများ၊အလွန်မကြာခဏအရသိကျွမ်းနှင့်အတူငွေရတတ်သောသူသည်။ အများဆုံးဖွယ်ရှိ၊ဒါကြောင့်လိမ့်မည်မဟုတ်တစ်ဦးပြပွဲအလှကုန်၏၊ဒါပေမယ့်ဥပမာအားဖြင့်၊တစ်ဦးပြပွဲ၏ပန္အကား။ အဲသည်လိုအပ်သောပြသရန်အစွန်းရောက်တိုး၊မည်သည့်အမှတ်တံဆိပ်၏အကြောင်းကိုမေးမြန်းကြပြီး၎င်း၏အပြုသဘောရှုထောင့်မှတစ်ဦးဆွဲဆောင်မှုလူငယ်အမျိုးယောက်ျား၊ချောချောမွေ့မွေ့ပြောင်းရန်အတွက်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူ။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ချင်တယ်ဆိုရင်သင်အလုပ်အသစ်အသိအကျွမ်းရွေးချယ်ခြင်း၊အကြားတစ်ဦးအစုအဝေးအမျိုးသားများအတွက်၊ထို့နောက်သင်တစ်ဦး တိုက်ရိုက်မည္ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သင်သည်ဤအရပ်၊ဘယ်မှာရနိုင်ကျွမ်းနှင့်အတူအလေးအနက်လူမရွိဘဲယုံကြည်ခြင်းအတွက်သွာ၏အားကြီးသောဝက်၏လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်အောင်မြင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒီမှာပါတချို့အကြံပြုချက်အဘို့အသွင်အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ချိန်းတွေ့အပေါ်သူတို့ရဲ့မျက်နှာ:ကိုစတင်နိုင်ရန်အတွက်အကျွမ်းနှင့်အတူသည်ဖြစ်စေအလေးအနက်၊နှင့်ထိုက်မှလိုအပ်တင်လှသောဓာတ်ပုံများမရဖော်ကျူးသင့်ရဲ့လိင်စိတ်နှင့်မိမိ၏ကြွယ်ဝသောအတွင်းစိတ်ကမ္ဘာ။ တိုတောင်းတဲ့စာသားကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမည်အသးဒီးအသိရန်သင်ရွေးချယ်ဖို့အမှန်တကယ်ထိုက်၊ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုသင်ဆက်သွယ်ရေးအမှုကဲ့သို့:အသွင်သို့မဟုတ်အစစ်အမှန်။ တစ်ဦးလျှင်လူသည်သင်၌စိတ်ဝင်စား၊ချက်ချင်းသဘောတူရန်နေ့စွဲပေမယ့်လျှင်မဖြစ်ဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့သင်အစပိုင်းတွင်၊ဒါကြောင့်လိမ့်မည်အရှိဆုံးအကျိုးရှိဖြတ်ရပ်တန့်ပါမဆိုင်းမတွ။ နည်းနည်း၏အချစ်ဇာတ်လမ်းနေရာရနိုင်ကျွမ်းနှင့်အတူလူအခက္အခဲရွိတဲ့ခရီး။ လူတွေအထူးစိတ်ဖြစ်ခြင်း၊ ပင်လယ်အနီး၊အရာအားလုံးကိုတိုက်ရိုက်ရှူရှိုက်ချစ်ကြောင်း၊အဘယ်ကြောင့်ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးမှာအပန်းဖြေပင်လယ်ချည်ထားနေကြပါတယ်၊အလွန်လွယ်ကူစွာ။ နောက်ထပ်မေးခွန်းဖြစ်ပါသည်ကြောင်းသူတို့အမြဲအဆုံးသတ်နှင့်အတူရေရှည်ဆက်ဆံရေးနှင့်ဘုံဘဝ။ လုပ်သက်ကောင်း၊မကြောက်ကြ၏။ လျှင်သင်သည်သင်၏အလုပ်ထောက်ပံ့ကန့်သတ်အရေအတွက်၏အခွင့်အလမ်းမှလူသစ်ဖြည့်ဆည်းနိုင်-ပြောင်းလဲ။ ရွေးကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အလုပ်ဆိုင်အတွက်အရောင်းကွန်ပျူတာများ၊လူ့အဝတ်အစား၊ကား၊ဆေးရွက်ကြီးထုတ်ကုန်များ။ ဘယ်မှာသင်တွေ့ဆုံနိုင်ပါတစ်လျောက်ပတ်သောယောက်ျားသည်။ မဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုသင်ချက်ချင်းဖြည့်ဆည်းချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေအများကြီး၊ဒါပေမယ့်ပရိသတ်ကံပေါ်လာအလွန်ကြာ။ လျှင်သင်အကြောင်းတွေ့မြင်သူမစိုက်ဖို့၊သို့သော်၊သူကမယူပါဘူးဆိုတက်ကြွစွာလှုပ်ရှားမှုအ မိမိ -စတင်ဆောင်ရွက်ရန်။ အပေါ်မူတည်၏ပထမဦးဆုံးစကားပြောနှင့်အရာကိုအပေါ်ထင်မြင်စေရန်၊ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အားလုံးနောက်ထပ်ဆက်ဆံရေးမူတည်။ အရာအားလုံးအဆုံးသတ်မည်အပေါ်တစ်ဦးဆက်သွယ်ပြောဆို၊စိတ်မဆိုးရ။ သင်ထိုသို့အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းအချိန်၊အချိန်မီရပ်တန့် ဆက်ဆံရေး၊ထိုသို့အားဖြင့်ခန့်ခွဲများကြီးပိုပြီးအချိန်ဆက်သွယ်ဖို့အမျိုးသားများနှင့်အတူကိုက်ညီကြောင်းသင်ပို။ သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့နိုက်၊သင်လိုအပ်ငွေကြေးနှင့်မဟုတ်သေး၊ဒါကြောင့်အဘို့ရှာကြသည်လျှင်နေရာရနိုင်ကျွမ်းနှင့်အတူငွေရတတ်သောသူသည်၊ထိုအခါသင်သည်လက်ျာဘက်ကဒီမှာရှိတယ်။ ဒီအအတိအကျရာအရပ်သို့သူတို့အကြံသည်ဖြစ်နှင့်ကောင်းတစ်အချိန်အတွက်ကုမ္ပဏီ၏။ တစ်ခုတည်းသောအားနည်း၏ဤအဖွဲ့အစည်းအလင်းရောင်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်၊ထိုလုလင်သည်သင်ကြိုက်ညနေခင်းတွင်နိုက်ကလပ်အတွက်၊ဒါကြောင့်မဖြစ်စေခြင်းငှါမှာတော်တော်လင်းတယ်။ တချိန်တည်းမှာပင်၊အလွန်မကြာခဏဧည့်သည်၏နိုက်ပဳျအတွက်တစ်-အချိန်။ ထို့ကြောင့်၊လျှင်သင်လည်းအတွက်စိတ်ဝင်စားဒီတော့မျှော်လင့်လျှင်မူကားသင်၏ရှာဖွေရေးအတွက်စံပြသည်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး၊သင်ကဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်အလွန်သတိထား။ အလွန်ကောင်းသည်ရှာဖွေဒုတိယထက်ဝက်-ဒါကဝါသနာပါတယ္။ ဘယ်အရာမျှမစွမ်းဆောင်ခဲ့၏လူမျိုးအဖြစ်အတူတကွအလုပ်လုပ်၏စီးပွားဖြစ်ရလိမ့်မည်၊နှစ်ဦးစလုံးသူတို့အကြိုက်ခြင်းငှါ။ ပြဇာတ်၊ရေငုပ်၊ကခုန်-ဒီ နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်အကျိုးစီးပွား၊အရာဖန်တီးနိုင်ပါတယ်လိုအပ်ချက်အတွက်အဆောက်အဦအတွက်အခြေခံအလေးအနက်ဆက်ဆံရေး။ အကျွမ်းနှင့်အတူထိုလုလင်သည်အရေးပါအချက်။ ဒါဟာသင့်သာတူဖြစ်ပျက်ဘွဲ့။ သင့်ရွေးချယ်ခံရသူပြီးသားရှိပါတယ်အပေါ်မှာလက်စွပ်ကိုလက်ညှိုး၊ကောင်းမှကွာနေရန်။ အထူးသဖြင့်လျှင်သူသည်ဆွဲဆောင်မှုအပေါင်းတို့သည်အဖက်ဖက်တွင်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်၊အနာဂတ်အတွက်သာမှခံစားနေရပြီးညီညွတ်မေတ္တာသည်သင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေ။ နှင့်ဤမျှကောင်းသော။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကပျော်ရွှင်မှုနှင့်မျှော်လင့်အတွက်သာ။
အွန်လိုင်းပြင်သစ်စကားပြောခန်း၊ပြင်သစ်တိုက်ရိုက်ချက်တင်အွန်လိုင်းဖုအခန်းပေါင်းစကားပြောခန်း၊ပြင်သစ် အခန်းပေါင်းစကားပြောခန်း၊ဒေသခံစိမ်းပြင်သစ်စကားပြောခန်း။ အောင်မြင်တဲ့လူကသူစေသည်ထက်ပိုပိုက်ဆံသူ့ရည်းစားဖြုန်းနိုင်။ အောင်မြင်သောမိန်းကလေးတယောက်သောသူရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ထိုကဲ့သို့သောလူသားသည်၊ဤအကြောင်းကြောင့်မသွားလာပျော်ရွှင်ဘူးဆိုရင်မပေးပျော်ရွှင်မှု၊ ခွဲဝေပျော်ရွှင်မှုကိုသင်ဆရာဝန်။ မပေးလျှင်အရာတစ်ခုခုကိုသင့်ရဲ့ချစ်သူကိုမှ၊ထို့နောက်မကြာမီသင်တို့ကိုနားလည်သဘောပေါက်လာသောအချစ်စွမ်းအင်စီးဆင်းနေသည်အတွင်းသင်။ ဒါပေမယ့်ပေးပြီးယူအစဉ်အမြဲမ၏ငွေနှင့်ပိုက်ဆံအကြောင်းကြောင့်လည်းအမှုကိစ္စမဟုတ်ကြောင်းအချစ်သာအကျင့်နှင့်အတူအပေးနဲ့အယူသာ။ သင်ပြုလိုအပ်သမျှအထားအချိန်နှင့်ဖြစ်ကောင်းရား့အချိန်ပင်ပိုပြီးအဖိုးတန်အထက်သုံးစွဲငွေအများကြီး။ အခါသင်အထားအပေါ်အချိန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြင်သစ်အုပ်စုချက်တင်၊အစိမ်းနှင့်အတူစကားပြောတစ်ဦးတစ်ယောက်အနေဖြင့်ပြင်သစ်၊ဖစ္သျချက်တင်၊ဗီဒီယိုစကားပြောထံမှမိန်းကလေးငယ်များနှင့်အတူပြင်သစ်နောက်သင်သဘောပေါက်လဲလှယ်၏ခံစားချက်ကိုပေးနိုင်ပါသည်သင်အလွန်ကြီးစွာသောအပျော်အပါးနှင့်ပျော်ရွှင်မှု။ ဒါကြောင့်၊ကုန့်ခံစားအပေါ်တိုက်ရိုက်အဖု၊နှင့်အတူယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများမှပြင်သစ်၊ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ပြင်သစ်နိုင်ငံမိုဘိုင်းချက်တင်။ စိတ်ဝင်စားဖို့အချက်အလက်အကြောင်းပြင်သစ်:စုစုပေါင်းလူဦးရေ၏ပြင်သစ်ဖြစ်ပါသည်။ သန်းနှင့်ပြည်သူ့အဓိကအားဖြင့်ခရစ်ယာန်(ရောမကက်သလစ်)။ ပြင်သစ်တွင်သင်လက်ထပ်ထိမ်းမြားအသေအလူ၊အမှန်စင်စစ်ဥပဒေ၏ခွင့်ပြုဒီဒါပေမယ့်သာအလွန်ခြွင်းချက်အမှုပေါင်း။ ရှိခဲ့ပါပြီဤမျှလောက်များစွာသောလူမျိုးကြီးသင် ပြုမိပါပြီအလွန်ကြီးစွာသောတီထွင်နှင့်ရရှိခဲ့သည်ဟာနာမတော်ကိုကမ္ဘာကျော်အားလုံးအနည်းငယ်ဤသိပ္ပံပညာရှင်များမှာ:-နန် ၊ အပြင်၊ ၊ယောသပ်နှင့် နှင့်များစွာသောပို။
ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳပြင်သစ်ဗီဒီယိုစကားပြောခန်း။ ဤသူကားအအင်္ဂလိပ်ကျပန်းစိမ်းစကားပြောခန်း။ တွေ့ဆုံစိမ်းပြင်သစ်မိန်းကလေးယောက်ျားလေးများအတွက်အင်္ဂလိပ်စကားပြောခန်း။ စာသားနှင့်အတူအင်္ဂလိပ်ကျပန်းစိမ်း။ ပြောဆိုရန်စိမ်းရဲ့ပြင်သစ်ဖစ္သျစကားပြောခန်း၊စကားပြောကျပန်းစကားကလူကိုအင်္ဂလိပ်၊ပြင်သစ်စကားပြောစိမ်း၏အက္ပ္ကို၊ချက်တင်နှင့်အတူအင်္ဂလိပ်လူမျိုးစကားပြောဖို့၊အစိမ်းရဲ့စာသား၊ပြင်သစ်မိုဘိုင်းချက်တင်၊ပြင်သစ်စကားပြောခန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲ၊စကားပြောပြင်သစ်လူမျိုး၊ပြင်သစ် ဗီဒီယိုချက်တင်၊အင်္ဂလိပ်စကားပြောနှင့်အတူစိမ်း၊ ပြင်သစ်၊အင်္ဂလိပ်စကားပြောခန်းများအတွက်တစ်ဦးတစ်။ အခမဲ့ပြင်သစ် စကားပြောခန်း။ ယူအက်စ်အေ၊ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ကနေဒါ၊မက္ကစီကို၊ယူကရိန်း၊ပြင်သစ်၊ဂျာမနီ၊အီတလီ၊ရိုမေးနီးယား၊စပိန်၊ဆွီဒင်၊ဆွစ်ဇလန်၊ပေါ်တူဂီ၊တူရကီ၊သြစတြီးယား၊ဘီလာရုစ်၊ဘယ်လ်ဂျီယံ၊ဒိန်းမတ်၊အိုင်ယာလန်၊ဖင်လန်၊ သြစတြေးလျ၊အာဂျင်တီးနား၊ဘရာဇီး၊ချီလီ၊ကိုလံ၊ပိုလန်။ ေဆာ္ဒီအာေရး၊ဘာရိန္း၊အာေမးနီးယား၊အီရန်၊အီရတ်၊အစ္စရေး၊ဂျော်ဒန်၊ကူဝိတ်၊အိုမန်၊ကာတာ၊ဆီးရီးယား၊ယူအေအီး၊ယီမင်၊အီဂျစ်၊တောင်အာဖရိက၊ဇင္ဘာေဘြ၊ျရက္စ္၊ေမာ္ရုိကို၊နိုင်ဂျီးယား၊ဆူဒန်၊အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား၊အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား၊ယူဂန္ဒါ။ ရုရှား၊အိန္ဒိယ၊ကာဇက်စတန်၊လစ္ဗ်ား၊တာဂျစ်ကစ္စတန်၊ဥဇဘက်၊ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ၊မင္နီ၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ပါကစ္စတန်၊အင်ဒိုနီးရှား၊ဖိလစ်ပိုင်၊မလေးရှား၊ဂျပန်၊တရုတ်၊တောင်ကိုရီးယား၊စင်ကာပူ၊ဗီယက်နမ်၊ထိုင်းနိုင်ငံ။
ငါတင်ထားသောဤအဘို့အအကြီးအကဲတစ်ဦးကအစ်မ။ ဒီ ၊ကျွန်မဒီနေရာကိုလာတုန်းကအလားတူအခြေအနေ၊ဒါပေမယ့်ယနေ့အချိန်တွင်၊ကျွန်မအတွက်လာ။ တကယ်တော့၊ငါပျော်ရွှင်ခဲ့လာ ။ ဤအတောအတွင်း၊အကြီးအကဲတစ်ဦးကအစ်မအဖြစ်၊ငါကအစဉ်အမြဲကဲ့သို့အမှုရည်ညွှန်းဖို့၊လိုအပ်ကောင်းတစ်ဦးကိုခရစ်ယာန်လူ၊အဘယ်သူသည်အသက်၏နှစ်ဦးအဘို့အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး၊လက်ထပ်ထိမ်းမြားဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ။ သူမသည်သူမ၏အလွန်အစောပိုင်း။ သူမတစ်ခုတည်းနှင့်မွမရွိပါဘူး။ ဒါဟာတစ်ဦးအလွန်ရှည်လျား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊အကြင်ဖက်သူမ၏ဖော်ပြချက်နှင့်စိတ်ဝင်စားသူ၊သင့်ခေါ်ပါသူမတိုက်ရိုက်လိုင်းပေါ်မှာ။ သတိပြုပါ၊သူသည်ပညာတတ်သော၊သူမ၏ကိုယ်ပိုင်အလုပ်။ အားလုံးလိုအပ်တဲ့လူေခၚလိုသူမ၏ကိုယ်ပိုင်။ သူမဆန္ဒရှိဖို့ပြောင်းရွှေ့လျှင်၊ရဲ့အဘယ်အရာကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာသူမ၏အသက်တာ၏၊ရန်လိုပေမည်။ နောက်ဆုံးတော့၊မေတ္တာသည်ဘုရားသခင်၏၊အကြင်သင်သည်သန့်ရှင်းသောကိုင်ထား၊အလွဲသုံးစားမနေပါနဲ့သို့မဟုတ်စော်ကားပေါ်မှာမည်သူမဆိုဤချည်။ ယခုဘဝ၌၊အဘယ်အရာကိုအခြားသူများအလွယ်တကူ၊အခြားသူများနိမ့်ကျခက်ခဲရရှိရန်အတွက်နေ့စဉ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါတင်ထားသောဤအဘို့အအကြီးအကဲတစ်ဦးကအစ်မ။ ဒီ ၊ကျွန်မဒီနေရာကိုလာတုန်းကအလားတူအခြေအနေ၊ဒါပေမယ့်ယနေ့အချိန်တွင်၊ကျွန်မအတွက်လာ။ တကယ်တော့၊ငါပျော်ရွှင်ခဲ့လာ ။ ဤအတောအတွင်း၊အကြီးအကဲတစ်ဦးကအစ်မအဖြစ်၊ငါကအစဉ်အမြဲကဲ့သို့အမှုရည်ညွှန်းဖို့၊လိုအပ်တဲ့ ကောင်းသောခရစ်ယာန်လူ၊အဘယ်သူသည်အသက်၏နှစ်ဦးအဘို့အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး၊လက်ထပ်ထိမ်းမြားဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ။ သူမသည်သူမ၏အလွန်အစောပိုင်း။ သူမတစ်ခုတည်းနှင့်မွမရွိပါဘူး။ ဒါဟာတစ်ဦးအလွန်ရှည်လျား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊အကြင်ဖက်သူမ၏ဖော်ပြချက်နှင့်စိတ်ဝင်စားသူ၊သင့်ခေါ်ပါသူမတိုက်ရိုက်လိုင်းပေါ်မှာ။ သတိပြုပါ၊သူသည်ပညာတတ်သော၊သူမ၏ကိုယ်ပိုင်အလုပ်။ အားလုံးလိုအပ်တဲ့လူေခၚလိုသူမ၏ကိုယ်ပိုင်။ သူမဆန္ဒရှိဖို့ပြောင်းရွှေ့လျှင်၊ရဲ့အဘယ်အရာကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာသူမ၏အသက်တာ၏၊ရန်လိုပေမည်။ နောက်ဆုံးတော့၊မေတ္တာသည်ဘုရားသခင်၏၊အကြင်သင်သည်သန့်ရှင်းသောကိုင်ထား၊အလွဲသုံးစားမနေပါနဲ့သို့မဟုတ်စော်ကားပေါ်မှာမည်သူမဆိုဤချည်။ ယခုဘဝ၌၊အဘယ်အရာကိုအခြားသူများအလွယ်တကူ၊အခြားသူများနိမ့်ကျခက်ခဲရရှိရန်အတွက်နေ့စဉ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်မအထင်သူတို့နှစ်ဦးသီးခြားလူပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ်အခြေခံဖော်ပြချက်ကို၏နှစ်ဦးစလုံး။ ဘူးသူတို့ကိုမွှေ။ သင်တဦးတည်းလာ။ မဟုတ်လျှင်သင်ကသက်သေပြမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ထည့်ရန်ဖြစ်ကြောင်းသင်အလှည့် ဒီနောက်ကတည်းကအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဖျက်ပစ်နိုင်ပါတယ်၊ငါအံ့သြသွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေလျှင်သင်အပြင်အခြားခေါင်းစဉ်သို့မဟုတ်ဘန်ကီမွန်းကၽြန္ုပ္၏မဟုတ်လျှင်သင်သက်သေပြမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ထည့်ဖို့ သောသင်တို့၌အလှည့် ဒီနောက်ကတည်းကအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဖျက်ပစ်နိုင်ပါတယ်၊ငါအံ့သြသွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေလျှင်သင်အပြင်အခြားခေါင်းစဉ်သို့မဟုတ်ဘန်ကီမွန်းကငါ့ကိုနှစ်ဦးစလုံးဖတ်သည့်အကြောင်းအရာခန့်မှာမနေ့က(မမွား)၊ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်သာဒုတိယခေါင်းစဉ်ကိုဖျက်ထားသည်ကိုနာရီအနည်းငယ်ကြာ။ ဒါကဘယ်လိုသိနှစ်ဦးစလုံးကွဲပြားခြားနားကြသည်။ အဘယ်သူမျှမစုံလင်သည်အင်္ဂလိပ်ဘာသာအတွက်ပါ။ မွီနေစဉ်၊ငါပိုင်တစ်စုမှာအပေါ် မကြက္၊ဒါပေမယ့်မပြောင်းပါဘူး။ စစ်ဆေးသည့်အခါမှတ်ပုံတင်အပေါ် မကြက္၊သင်သိထိုက်အချို့သောလေးစား။ မဖျော်ဖြေဆိုလဲဗ်ာ၊ကျေးဇူးပြု။ ငါနှစ်ဦးစလုံးဖတ်သည့်အကြောင်းအရာခန့်မှာမနေ့က(မမွား)၊ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်သာဒုတိယခေါင်းစဉ်ကိုဖျက်ထားသည်ကိုနာရီအနည်းငယ်ကြာ။ ဒါကဘယ်လိုသိနှစ်ဦးစလုံးကွဲပြားခြားနားကြသည်။ အဘယ်သူမျှမစုံလင်သည်အင်္ဂလိပ်ဘာသာအတွက်ပါ၊ဒါပေမဲ့မပြောင်းပါဘူး။ စစ်ဆေးသည့်အခါမှတ်ပုံတင်အပေါ် မကြက္၊သင်သိထိုက်အချို့သောလေးစား။ မဖျော်ဖြေဆိုလဲဗ်ာ၊ကျေးဇူးပြု။
စာဖတ်သူရဲ့မှတ်ချက်:အောက်ပါပို့စ်အကြောင်းသေးနောက်ထပ်တစ်ခုစျေးကြီးစက်များသိပ္ပံနည်းကျသုတေသန။ ထိုမေးခွန်းအတွက်အဘယ်သို့မိန်းမတို့အမှန်တကယ်ချင်တယ်။’လူတချို့ဖြေပါလိမ့်မယ်’ငွေ၊အခြားသူတို့အဖြေ’သူငရဲသိတယ်။ တို့၏အပို ကွေးပြန်ပြောမည်’ခုနစ်လက်မသို့မဟုတ်ပို။ ‘စာဖတ်သူရဲ့မှတ်ချက်:အသက်အတွက်စစ္ၿလမ္းမကြာသေးမီကတင်ထားတဲ့ရးသားတွင်’မင်းပူအရူးမောင်မောင်:လူရဲ့လမ်းညွှန်မှအမျိုးသမီး။ ‘သူမ၏သတိပြုမိခဲ့သည်ကတည်းကအဲဒီဖြစ်နေဆဲဝေးသွားသူမ၏လူကြိုက်အများဆုံးပို့စ်ရက်စွဲဖို့၊ညွှန်းဖို့သူမဖြစ်စေအနက်အကျိုးစီးပွားအပေါ်အမျိုးသားများရဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုနားလည်ရန်အမျိုးသမီးသို့မဟုတ်အလေးအနက်ယုံကြည်ကြောင်းပူပြင်းတဲ့အမျိုးသမီးအရူးဖြစ်ကြ၏။ ဒီပို့စ်စေခြင်းငှါအစေခံရန်နော၊တနင်းလာ။ ဒီမှာအတူဝင်အပို့စ်:လေ့လာမှုတစ်ခုထုတ်ဝေကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်လူမှုစိတ်ပညာမိုးေမကြာသေးမီကတွေ့ရှိခဲ့သောအစဉ်အမျိုးသားတွေကဆွဲဆောင်အားကောင်းတဲ့-ပုံမျိုးသမီးများအစည်းအဝေးအပေါ်သို့၊သူတို့ကိုအမျိုးသမီးဘဲတူညီသောလမ်းခံစားရကြောင်း။ သုတေသီများ၏တက္ကသိုလ်ကနေ ၊အီလီနွိုက်တက္ကသိုလ်မှာဘန်နှင့်အ အမွတ္စဥ္(တြင္နွစ္သက္ရာ)၌ဣသခါအဖြစ်နိုင်သောယန္တရားသည်လည်းအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူလက်ခံဆန့်ကျင်ဘက်လိင်။ ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရပ်တန့်အခိုက်အဘို့နှင့်သတိပေး ကိုယ်ကိုကိုယ်ကြောင်းတစ်လျှောက်လုံးအချိန်၊အမျိုးသမီးများစွာဖို့ဆွဲဆောင်ခဲ့ကြ’မကောင်းတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်။ ‘ဤမကောင်းတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည် အားဖြင့်အငယ်နေ့အထက်တန်းကျောင်းတစ်ပိုင်းတစ်စသူပိုပြီးတက်တူးထက်ဦးနှောက်ဆဲလ်။ ရုပ်ရှင်တွေတူညစ်ပတ်ကခုန်၊စနေနေ့ညဥ့်အဖျား၊’နဲ့’အရိုင်း’ဆာင္ရည္ေသူတို့ကိုယ်ပိုင်ဗားရှင်းမကောင်းတဲ့ယောက်ျားလေးများ။ ပုံစံဆင်တူသည်:မကောင်းတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်(တကယ်တော့ပိုပြီးရှုပ်ထွေးလွဲမှားနားထက်ဆိုးသော)အပူကယ့်ကိုပူပြင်းအရမ်းပူနှင့်အကြီးချေ။ ကောင်းမိန်းကလေးတူမေတ္တာ၌ကျရောက်ကုန်၏၊အတွေ့အဆုံးသတ်မှာသူ့နည်းချက်တွေကိုလည်းကိုင်တွယ်ရန်။ သူမဝင်နေရာတိုင်းမှဆင်းသက်လာခဲ့သူနှင့်လက်ထပ်မဂၤလာပါဆရာ။ အခုတော့နောက်ကျောမှသုတေသန:တရာတကျိပ်နှစ်ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားတွေခွဲမျှအကြားအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၊နှင့်အကယ္၍တွဲကျပန်းနှင့်အတူဆန့်ကျင်ဘက်လိင်တူချင်းသူတို့မတွေ့။ ထိုလေ့လာဆန်းစစ်လန်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားနှင့်သင်တန်းသားများ’ခံစားချက်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုရေရှည်ချိန်းတွေ့နှင့်အတူသူတို့ရဲ့အသစ်’မိတ်ဖက်၊’နှင့်မည်သို့သူတို့အားချိတ်ဆက်ဖို့သူတို့ရဲ့အမြင် အကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရိုလေ့လာမှုခၚ’တုန့်ပြန်။ ‘အဖြစ်ဦးဆောင်သုတေထား၊’လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအပေါ်သီးများစွာသီးနေရင်းနှီးကျွမ်းခြင်းတုံ့ပြန်မှုသည်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခုတွင်ရှိအောင်ရန်ဤတွေ့ရခဲသောအလွင်ပင်အကျော်အချိန်။ ‘သို့သော်အဘယ်သုတေသီများတွေ့ရှိခဲ့တော်တော်သော်လည်းအံ့သြ(သူတို့)။ အမ်ိဳးအစားမ်ားတုံ့ပြန်မှုမျိုးသမီးကိုပိုဣတ္နှင့်။ အခါအမျိုးသမီးတစ်ဦးကတုံ့ပြန်မှုကြုံတွေ့ယောက်ျား၊သူတို့လျော့နည်းဖို့စိတ်ဝင်စားသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး။ အာင္ဒီအပိုပြီးအခြေခံပညာအဆင့်အတြက္အဲဒီကြသူစာဖတ်သူတွေစားဘေကွန် နေစဉ်သူတို့ဤဖတ်:အတွက်ကနဦးရင်ဆိုင်၊ယောက်ျားကြိုက်ကောင်းတဲ့အမျိုးသမီး။ အမျိုးသမီးထင်ကောင်းအမ်ိဳး ။ ဒုတိယလေ့လာမှုလိုအပ်သူများနှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဖြစ်စေတုံ့ပြန်မှုသို့မဟုတ်ဥပေက္ခာလူဆန့်ကျင်ဘက်လိင်၏၊ထိုအခါထိတွေ့သူတို့နှင့်အတူအွန်လိုင်းအစဉ်အသေးစိတ်လက်ရှိပြဿနာကိုသူတို့ရဲ့အသက်တာ၌။ ဒီမှာရည်မှန်းချက်ကြီးဖယ်ရှားဖို့အလားအလာ ဒြပ်စင်၏တိုက်ရိုက်လူမှုရေးအပြန်အလှန်(ပြုံး၊ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှု)မှကြည့်လျှင်သူတို့ခွဲထုတ်နိုင်လုပ်နည်း အများကြီးတုန့်ပြန်သို့မဟုတ် ကစားသို့ဆွဲငင်။ နောက်တဖန်အ၊အမျိုးသားများအတွက်လေ့လာမှုကအထင်တုံ့ပြန်မှုနှင့်စေ့စေ့မျိုးသမီးတွေပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုဖြစ်အလားအလာမိတ်ဖက်၊အစဉ်အမျိုးသမီးတွေ့အမျိုးသားများနှင့်အတူသူတို့အတူတူအရိုက်ခံရဖို့အရာတစ်ခုခု ၊သူတို့ပြင်ဆင်မှုအတွက်ကြောင့်စိုက်အား၏အောက်ခြေဖိနပ်။ တတိယနှင့်နောက်ဆုံးလေ့လာမှုအတွက်ပေးအပ်ခြင်းစက္ကူတွေကိုရှာကြံစမ်းသပ်ဖို့အထူးသဖြင့်ဖြစ်စေသောယန္တရား’ဖမ္ရန္’လှုံ့ဆော်တစ်ဦးချင်းအလိုက်ဆက်ဆံရေးခဲ့သည်၊တကယ်တော့၊လိင်စိတ်။ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့၊သူတို့ဆက္စပ္ၿဒုတိယလေ့လာမှုမှာ၊ဒါပေမယ့်ထည့်သွင်းတိကျတဲ့အတိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှု။ သူတို့ကတော့ကြောင်းတွေ့ရှိသည့်အခါလူတို့တွေ့အမျိုးသမီးဖြစ်ဖို့တုံ့ပြန်မှု၊ဒါကြောင့်ဦးဆောင်ဖို့အမြင့်လိင်စိတ်ပါ။ ထို၊အလှည့်တွင်ဦးဆောင်ကြီးများအတွက်ဆန္ဒ။ တူညီတဲ့ရလဒ်:အမ်ိဳးအစားမ်ားကိုလိင်လိုလား။ အမျိုးသမီးထားဘီမ်ားအခိုင်အမာနေရာအတွက်။ သုတေသီများနေဆဲသေချာသေးအဘယ်ကြောင့်အမျိုးသမီးများကိုလျော့နည်းရောဂါမှတုံ့ပြန်မှုစိမ်းအမျိုးသားများထက်။ သူတို့ရှိသည်။ ရာင္နည္းနည္းကို သီအိုရီ။ ကယ်တင်နိုင်သည်ကိုဤသူသုတေသီတွေအများကြီးအချိန်နှင့်ဒုက္ခ။ သူမကသူမ၏ကိုယ်ပိုင်သီအိုရီဖြစ်ဖို့အဘယ်ကြောင့်အများအပြားအမျိုးသမီးများကိုဆွဲဆောင်ဖို့မကောင်းတဲ့အခက် ။ ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့င့်။ အဆုံးစွန်သောအသိမ်းမရှိဆိုတော့ကောင်း၊မွှေးသောကောင်လေး။ သူအကြိုက်၊သမ္မာ။ ကြေးဝါသည်လက်စွပ်ဖြစ်ပါတယ်ရတဲ့ဖို့တစ်စုံတစ်ဦးကဲ့သို့သင်တို့မဟုတ်သူတစ်ဦးသည်ရရှိနိုင်ပါသည်သို့မဟုတ်ချဉ်းကပ်။ သူကစီးမှာဆိုင်ကယ်တစ်စီးပေါ်သို့မဟုတ်လူတန်းစားအတွက်ဝတ်ဆင်မင်္ဂလာဆောင်ဝိုင်းသို့မဟုတ်မယူသူ၏။ သူရဲ့ကြောက်စရာနှင့်အန္တရာယ်နှင့်အတိအကျဘာကိုမေသတိပေးပြီးကြောင်း။ ကျွန်တော်တို့ညာဘက်ကိုသွားရှိပါတယ်။ အဆိုပါရည်မှန်းချက်၊ဟုတ်ပါတယ်၊သူတစ်ဦးသာတူမေတ္တာ၌ကျကြလိမ့်မည်အမေရိကန်နှင့်ရပ်တန့်စီးနင်းဆိုင်ကယ်သို့မဟုတ်အဝတ်အဝိုင်းသို့မဟုတ်အမည်စယူပြီးသူ၏။ အခြားစကားများတွင်၊ကျနော်တို့အပြောင်းဖြစ်လာမှသူ့ကိုပိုကြိုက်သောအမျိုးသားများအကျွန်တော်တို့ဟာမဟုတ်ဆွဲဆောင်ဖို့ပထမဦးဆုံးအရပျ၌။ သမီးအများစုသဘောပေါက်မီအရမ်းရှည်လွန်းကြောင်းဖြစ်ကောင်းမကောင်းတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောကောင်းတစ်စိတ်ကူးပြီးနောက်ရှိသမျှတို့၊သူတို့ကအတူတက်အဆုံးသတ်ကောင်း။ အခြားသူများအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်လိုက်ပြီးနောက်ဆိုးကောင်လေးတစ်ယောက်၊များသောအားဖြင့်နှင့်အတူကြိုတင်ခန့်မှန်း။ သေးငယ်တဲ့အရေအတွက် တက်အဆုံးသတ်နှင့်အတူမကောင်းတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်၊အဘယ်သူသည်အမှန်တကယ်တစ်ဦး၏နှလုံးသည်၊ရွှေနှင့်မောင်ကျဆံရေးအလုပ်လုပ်တယ်။ အလွန်အ၊အလွန်သေးငယ်တဲ့အရေအတွက်ကို။ ဟောလိဝုဒ်အတွက်နှင့်မှန်ကန်အသက်တာ၌၊ဤမကောင်းတဲ့ယောက်ျားလေးများသူကောင်းပြုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့သူတို့ရောက်ရှိသည့်အသက်အရွယ်မှာသူတို့ရိုးရိုးလွန်းငြီးငွေ့ဖို့ဆက်လက်လုပ်နေတယ်သူတို့ဘာတွေလုပ်နေကြပြီ။ အရှေဆင်းလာသူတို့အားလုံး၏နိုင်စွမ်းရှိကြတယ်။ ခပ္ျအပေါ်ထောင်၊ဂျော့ခ်ျ ။ ထိုမေးခွန်း၏အဖြေများ’အဘယျသို့ပေမျိုးသမီးများအမှန်တကယ်ချင်တယ်။’ဖြစ်ပါသည်၊နောက်ဆုံးမှာ၊ငါတို့ရှိသမျှသည်ဖြစ်ချင်တယ်ချစ်ပြီးတန်ဖိုးထားကြသည်။ ကျွန်တော်ပဲယူစေခြင်းငှါကွဲပြားခြားနားသွားရာလမ်း၌ရှိပါတယ်ရဖို့သို့မဟုတ်ရဖို့ဘယ်တော့မှမ။ မေကံ၊ကျွန်တော်တို့ကျတွေအများကြီးမော်တော်ဆိုင်ကယ်ထိုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်။ ကြမယ်ဆိုရင်၊ကျနော်တို့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်တကယ်အရောင်သိပ်ပြီးမ။
ချိန်းတွေ့ပြင်သစ်နိုင်ငံကအွန်လိုင်း။ သည်ထိပ်တန်းဆိုဒ်များအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဘို့ပြင်သစ်တွင်။ ယနေ့တွင်ဒါကြောင့်ကြမည်မှာသေချာပါသည်၏တစ်ခုဖြစ်သည်အကြီးဆုံးအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့တဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေ။ ဒါဟာတည်ထောင်ခဲ့သည်လမ်းကိုပြန်နှစျတှငျ။ အစဉ်အဆက်ကတည်းက၎င်း၏အခြေခံအုတ်မြစ်၊ကဖန်ဆင်းတော်မူပြီ ပင်ပိုမိုလွယ်ကူ။ အဓိကစင်တာများအတွက်ချိန်းတွေ့ပြင်သစ်နိုင်ငံကအွန်လိုင်း။ တည်ရှိမှာ ။ အစပိုင်းတွင်၊၎င်း၏အကျိုးမကြီးအဖြစ်ယနေ့။ ဒီဆိုက်လူကြိုက်များရရှိထားသူအစဉ်အဆက်ကတည်းက၎င်း၏ဝယ်ယူရရှိမှု၏အယူအခြားဥရောပဆိုက်အဖြစ်လူသိများ။ ဒါကြောင့်သန်းပေါင်းများစွာ၏အဖွဲ့ဝင်များအပေါ်အဖွဲ့ဝင်စာရင်းရှိသမျှကျော်ကနေဥရောပတိုက်ရှိသောတိုးမြှင့်ဖို့အများ၏စာရင်း၏ထိပ်ဆုံးအကောင်းဆုံးလုပ်ငန်းစဉ်မှာပါဝင်ပတ်သက်တက်လက်မှတ်ထိုးဖြစ်စဉ်ကိုအတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့နှင့်လွယ်ကူသည်။ သင်ပြုရန်ရှိသည်အားလုံးသည်ဖြစ်ပါသည်သောကျားသင်ပိုင်။ ထိုအခါကိုရွေးချယ်ပါ၊ကျားသောသင်ချစ်မယ်လို့ချိန်းတွေ့နှင့်ထွက်သွားပေါ်ရက်စွဲများနှင့်ပျော်စရာနှင့်အတူညနေခင်း။ လည်းရှိပါတယ်၊အခြားဘာသာသင်ဖို့ရှိသည်မယ်လို့တက်ဖြည့်ကဲ့သို့သင်၏အသွင်အပြင်၊ပါဝင်သည်သင်၏အမြင့်၊အလေးချိန်၊အသားအရေသင့်ရဲ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့ပြီးသင့်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်အထွေထွေအတွက်။ အခါဤသည်ပြီး၊နောက်ထပ်စာမျက်နှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဖို့သင်တောင်းမည်ဖြည့်စွက်သတ်မှတ်သောဆန္ဒသင်သည်သင်၏စံပြမိတ်ဖက်အပိုင်။ ဤအတွက်အလွန်တူညီတဲ့စာမျက်နှာ၊သင်တို့သည်လည်း ခံရရန်လိုအပ်သည်တင်သင်၏ဓါတ်ပုံနှင့်တိုတောင်းတဲ့ဖော်ပြချက်၏ကိုယ်နှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး။ ဒါကြောင့်အဘယ်ကြောင့်စောင့်တော့ဘူး။ တက်လက်မှတ်ထိုးမှာအကောင်းဆုံးထဲကတစ်ခုပေါ်မှာဤ၊သင်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိသည့်အခြေခံကိုရှာဖွေမှုနှင့်အဆင့်မြင့်ရှာဖွေ။ အောက်ပိုင်း၏အခြေခံရှာဖွေ၊သင်တွေ့လိမ့်မည်မိတ်ဖက်နှင့်အတူမွေးဖွားရာရက်စွဲများ၊စံနမူနာရှာဖွေ၊စုံလင်သောရှာဖွေမှု၊အပြန်အလှန်ဖက်၊နှင့်ခြစ်။ ဤသည်အဘယ်အရာကိုကအရစိတ်ကြိုက်နှင့်သင်သည်သင်၏ပွဲအပေါ်အခြေခံပြီးအဆိုပါဘာသာသင်ဖန်ဆင်းတော်နှင့်အရည်အသွေးများနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကြောင်းသင်တို့အဘို့အကြည့်အတွက်အတူလိုက်ဖက်ဆန့်ကျင်ဘက်အခြမ်း။ အချို့၏အဓိကအစိကြောင်းအဆင့်မြင့်ရှာဖွေထည့်သွင်းအသက်အရွယ်သင်သည်သင်၏ဆိ၏နေထိုင်ရာအရပ်များ၊ပညာရေးဆိုင်ရာအရည်အချင်း၊အလုပ္အကိုင္၊ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်သောက်ရေအလေ့အကျင့်၊အခြားအစားအစာအလေ့အထနှင့်ဦးစားပေးများ၊စသည်တို့ကို။ ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူပွဲများအွန်လိုင်းအလွန်လွယ်ကူသည်။ ပြီးတာနဲ့တစ်ကိုက်ညီသောပွဲနဲ့သင့်ပရိုဖိုင်းသို့မဟုတ်တပင်ကိုမျှအရာမကိုက်ညီ၊ဒါပေမယ့် သောငယ်များ၏အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အသင့်အကြိုက်များ၊ထို့နောက်သင်ကသူတို့ကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်တဲ့။ အဆိုပါမီးေဟာကအမှန်တကယ်အမျိုး၏တစ်ဦး ချက်ပြသို့မဟုတ်အဂၤါကြောင်းခတ်ပေးနိုင်ပါတယ်၏ပွဲစဉ်သိသောသူတို့ကိုအတွက်စိတ်ဝင်စားကြ။ သို့သော်၊နိုင်ရန်အတွက်အဆက်အသွယ်နှင့်အတူထိတွေ့ရမှသင့်ရဲ့အလားအလာပွဲစဉ်အ၊သင်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်သင့်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှအယံအဆင့်။ အားလုံးအင်္ဂါရပ်များကိုဤဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်အသုံးပြုသည်ဟူသောဆက်သွယ်ရေးများအတွက်အခြေခံနှင့်ရိုးရှင်းသောမည်သည့်မျိုးမရှိဘဲပြဿနာများ။ သင်သည်ချက်တင်စကားပြောနိုင်မှာတဆင့်စာသားမက်ဆေ့၊စာချက်တင်၊အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူနေသောအပြင်နှစ်ဦးစလုံးအွန်လိုင်းနဲ့အော့ဖ်လိုင်း။ ဤသည်အမှန်တကယ်အကာအကွယ်ဘလော့ဂ်များနှင့်အသုံးဝင်သောဆောင်းပါးများကိုအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့၊ဆက်ဆံရေးက၊ချိန်းတွေ့များနှင့်စာရေးတံပို။ သင်တွေ့လိမ့်မည်အပေါ်ဒီနေရာကိုယ်၌ကအတော်လေးအသုံးဝင်သည်။ ဒီအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိပါတယ်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အရေးပေါ်အဘယ်မှာရှိသင်ဆက်သွယ်နိုင်အမှန်တကယ်လူတစ်ဦး၏မအနေနဲ့ဖြေကြားစက်။ သူတို့ကူညီဖြေရှင်းနိုင်သင့်ပြဿနာများ၏အားလုံးနှင့်ပူဇော်အချိန်မီကူညီပါ။ သို့သော်၊သာယံအဖွဲ့ဝင်များအရခံစားဖို့ဖောက်သည် ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ်။ ဖန်တီးနိုင်ရန်အတွက်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ပရိုဖိုင်ပေါ်တွင်ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်၊သင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးပေးဆောင်ဆိုအခကြေးငွေ။ သင့်အနေဖြင့်တင်နိုင်ပါသည်ဓါတ်ပုံ၊ရှာပရိုဖိုင်း၊လှောအဖွဲ့ဝင်များ၊ပိုလက်ခံရရှိသတင်းစကားများ၊အဆက်အသွယ်အခြားမိတ်ဖက်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များ၊နှင့်လည်းအသုံးပြုမှု၎င်း၏အံ့သြဖွယ်အမွှေအရာအင်္ဂါကန့်သတ်သည်ဤအဖွဲ့ဝင်များ။ အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူတစ်ဦးပရီမီယံအဖွဲ့ဝင်ရန်န့်အသတ်လက်လှမ်းအမွှေ။ သူတို့အမြင်အခြားအဖွဲ့ဝင်များရှိသည်သောသူများကိုကြည့်ရှုသင့်ပရိုဖိုင်း၊သင်စတင်နိုင်ပါသည်၊အသက်ရှင်သောချက်တင်နှင့်အတူအခြားအဖွဲ့ဝင်များနေသောအွန်လိုင်းနှင့်မွေ့လျော်၏အကောင်းဆုံးဖောက်သည်အထောက်အပံ့။ အထူးအဖြင့်အခကြေးငွေ၊သင်မြှင့်တင်နိုင်ပါတယ်သင့်ပရိုဖိုင်းကိုထိပ်မှရရန်အကောင်းဆုံးနေရာချထားစဉ်အတွင်းအကြိမ်အဆင့်မြင့်ရှာဖွေမှု၊နှင့်ကောင်းမွန်သောဘို့အတွက်ရွေးချယ်စရာများ။
လက်ထပ်ပြီးချိန်းတွေ့အမြန်နိုင်ငံ၏လူကြိုက်အများဆုံးပုံစံများ၏အရွယ်ရောက်ချိန်းတွေ့အတွက်သြစတြေးလျနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းနှင့်အတူအရွယ်ရောက်ချိန်းတွေ့ဗြိတိန်၊အမေရိက၊အာဖရိကနှင့်အပိုအိမ်ထောင်ရေးကိစ္စ။ ဒီအတွက်ကြောင့်အများစု၏လူတို့သည်၊တစ်ခုတည်းသို့မဟုတ်လက်ထပ်ပြီး၊အမေးနေကြတယ် ကိုယ့်ဘာကိုလက်ထပ်ချိန်းတွေ့။ သင်ချင်ပါတယ်ထင်လိမ့်မယ်အဖြစ်အသံကြောင့်ရိုးရှင်းပြီး၊ကိစ္စအများစုအတွက်၊ကြောင့်၊သို့သော်နှင့်အတူထောင်ရေးကိစ္စရတဲ့အထူးအရာတစ်ခုခု။ ချိန်းတွေ့ထောင်သည်ယောက်ျားသို့မဟုတ်မိန်းမဖြစ်နိုင်အန္တရာယ်နှင့်အန္တရာယ်များဖောက်၊ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူ။ ကိုယ်ရေးအချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဘို့ရှာကြသည်လျှင်လုံခြုံတဲ့ပုံစံအရွယ်ရောက်ချိန်းတွေ့၊ထိုအခါလက်ထပ်ပြီးချိန်းတွေ့နှင့်အတူမနိုင်တော့စံပြဖြစ်နိုင်။ ကိုယ့်ကိုတက်လက်မှတ်ထိုးနှင့်အပြီးအန္တရာယ်အန္တရာယ်များကန့်သတ်ရန်ရွှင်သောပမာဏနှင့်အတူလာအစာရှောင်အရှိန်အဟုန်နှင့်ၡမ်ားကမ္ဘာသို့မဟုတ်လက်ထပ်ပြီးချိန်းတွေ့။ နောက်ထပ်ပူမေးခွန်းအပေါ်ဤမျှလောက်များစွာသောလူတို့၏နှုတ်ခမ်းသည်အဘယ်အရာကိုတစ်ဦးကအိမ်ထောင်သည်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်ဖြစ်ပါသည်။ နောက်တဖန်အ၊ဒါကြောင့်တော်တော်များများရဲ့ဘာအသံလိုပဲ။ သို့သော်အားလုံးမဟုတ်အိမ်ထောင်သည်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များအတူတူပါပဲ။ ပိုပြီးဒီနေရာမှာအိမ်ထောင်ရေးကိစ္စကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုအရွယ်ရောက်ချိန်းတွေ့အတွေ့အကြုံနှင့်အတူတစ်ဦးခြားနား၊မသာသင့်ရဲ့အချက်အလက်လုံခြုံနှင့်ပုဂ္ဂလိကမှကိုယ်နဲ့အပေါင်းအဘော်အဖွဲ့ဝင်များကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေးရာဆိုက်သိုင်းသင်မူကားလည်းစိတ်ချပါငြိမ်ဝပ်စွာနေမပင်ဂူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်သင်ပရိုဖိုင်း။ အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စသည်လက်ထပ်ပြီးချိန်းတွေ့နှင့်အတူဆိုက် ခြားနားချက်၊ကကမ်းလှမ်းအစည်နှင့်ထိပ်တန်းအသိုင်းအတူ-စိတ်တူတစ်ဦးချင်းအားလုံးဖြည့်ဆည်းဖို့ရှာဖွေနေသူတို့၏အန္တိမစိတ်ကူးယဉ်ချိန်းတွေ့၏အခြားလက်ထပ်ပြီးတစ်ခုတည်းလူများအဖို့အနှေးငှေ့မြားသောကိစ္စ။ မင်းသမီးဖြတ်ပြီးသြစတြေးလျမကြာခဏစိတ်ကူးယဉ်အကြောင်းစိတ်ကူးထောင်သည်အမျိုးသားများချိန်းတွေ့တစ်ခါတစ်ရံတွင်အတွေ့အကြုံလာနိုင်အပြာများထဲက။ အဆိုပါကောင်းသော-ရှာဖွေနေကောင်လေးကမ်းခြေပေါ်တွင်တယ်စကားပြောဖို့စတင်အငှေ့မြားသောကိစ္စနှင့်အတူထွက်လှည့်အဖြစ်။ ပိုပြီးဒီခြောက်လှအချို့ချွတ်ပယ်၊ဒါပေမယ့်အများအပြားအမျိုးသမီးရဖို့အရသာများအတွက်အန္တရာယ်နှင့်အန္တရာယ်အချိန်းတွေ့၏လက်ထပ်ပြီးယောက်ျား။ ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အတွက်အဆင့်များကိုအကြီးမြတ်ဆုံးအရေးကိစ္စအတွင်းကမ္ဘာမှခွင့်ပြုခြင်းနေ့စွဲမှာလက်ထပ်ပြီးယောက်ျား၊သင်သည်သင်၏အားလပ်ဘယ်သူမျှမစွန့်စားမှုနှင့်ကြီးမားသောအသိုင်းအတူထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ခွင့်ပြု၊သင်ရှာတွေ့ဖို့စုံလင်သောကောင်လေးမှအနှေးငှေ့မြားသောချစ်ခြင်းမေတ္တာကိစ္စနှင့်အတူ။ သို့သော်အဘယ်ကြောင့်မမှာရပ်တန့်။ အဘယ်ကြောင့်မစတင်ကြိုးအသုံးအနှုန်းနှင့်အတူလက်ထပ်ပြီးယောက်ျားအပေါ်ထောင်ရေးကိစ္စ။ လျှင်သင်တောင်းမည်သည့်အနီရောင်အသွေးသြစတြေးလျဇင္လိုက္»ဖူး ချိန်းတွေ့အကြောင်းတစ်ထောင်သည်အမျိုးသမီး။»အများစု၏အဖြေများစွာပြီးနောက်အတွဖြစ်မယ်»ဟုတ်ကဲ့»။ ပိုပြီးသင်တစ်ယောက်တည်းမဖြစ်ဘူး၊အများ၏စိတ်ကူးချိန်းတွေ့ထောင်သည်အမျိုးသမီးသည်ရှက်ခြင်းအရာတစ်ခုခုမဖြစ်။ ဒီမှာထောင်ရေးကိစ္စကိုယုံကြည်ကြောင်းသင်ဆန္ဒရှိလျှင်သင္ၾကားေစိတ်ကူးယဉ်များအနေနဲ့ဒီကိစ်စရှိခြင်းနှင့်အတူအမျိုးသမီးကိုတော့သင်နိုင်ဖြစ်သင့်ပါဘူး။ ချိန်းတွေ့ထောင်သည်အမျိုးသမီးဖြစ်ဖို့ရှိသည်ပါဘူးတစ်ခုအန္တရာယ်ဖြစ်စေ၊ရိုးရှင်းစွာတက်လက်မှတ်ထိုးခြင်းနှင့်သင်ဖြစ်နိုင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာအများဆုံးပုဂ္ဂလိကနှင့်သတိပညာရှိအရွယ်ရောက်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များအပေါ်ပိုက်ကွန်ကို။ အောင်စိတ်ကူးယဉ်စစ်မှန်တဲ့လာနေ့တိုင်း။ နှင့်အတူမည်သည့်အမျိုးအစား၏အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့၊သင်အမြဲလိုအပ်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ကိုယ်ရေးချင်တယ်ဆိုရင်သင်ကရပ်နေမည်သည့်အခွင့်အအောင်မြင်။ ဤသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပါဝင်ပါသည်တစ်ခုဓာတ်ပုံနှင့်အပိုင်း၌သင်တို့ပြောပြနိုင်ရှိအခြားအဖွဲ့ဝင်များနှင့်ပတ်သက်။ ပေမယ့်သင်ကရေးသားဖို့အခမဲ့ဘာမှမ။ နေစဉ်လူများစွာသည်ပျော်ရွှင်တဲ့ ဆက်ဆံရေးရှိသည်အဘယ်သူမျှမအလိုဆန္ဒမှလွှဲ၊အခြားလူတွေကမကြာခဏအိပ်မက်များတစ်ဦးအရေးရှိခြင်း။ ဤအရာတစ်ခုခုသည်သင်စဉ်းစားခဲ့ကြကြောင်းအချို့အချိန်သို့မဟုတ်လျှင် အတွေးအနေနဲ့ဒီကိစ်စရှိခြင်းသည်အသစ်သင်ဖို့၊သင်လိမ့်မည်။ အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စ။ သမဂ္ဂများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်အများဆုံးကောင်းစွာလူသိများတဲ့အမှတ်တံဆိပ်အတွက်အမျိုးအစား၏ နှင့်အရွယ်ရောက်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များနှင့်ပြီပို့သာလွန်ဝန်ဆောင်မှုမှ၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်များ။ မှာအိမ်ထောင်ရေးကိစ္စ။ နေပြီ၊အရည်အသွေးအဖွဲ့ဝင်များမှတဆင့်သွားသောအတည်ပြုချက်လုပ်ငန်းစဉ်များ၊သေချာသင်အကောင်းဆုံးအခွင့်အဦးကြိုပြုခြင်းငှါအဘယ်သူသည်တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်တွေ့ဆုံသို့မဟုတ်သင့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်များထက်ကျော်လွန်။
အဓိကရည်ရွယ်ချက်ရှာဖွေနေအတွက်အချစ်နှင့်ပြင်သစ်။ အသံနည်းနည်းနောက်သင်သည်အဘယ်ကြောင့်လေ့လာမှုနှင့်အောင်ပထမဦးဆုံးမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများ၊အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးအားလုံးကိုငါပေးမည်၊အကောင်းဆုံးကိုအကြံပေးချက်များ။ ပြင်သစ်တြပိုမတ်ေတာအတှကျရှာဖွေနေနှင့်စိတ်အားထက်လူမှုရေးရာထူး၊သဘောထားကကျွန်တော်တို့အစက်အပြောက်အချို့နိုင်ငံများတွင်တစ်ခါတစ်ရံ။ လျှင်တွေ့ရှိမဟုတ်ရင်သင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဖြစ်စဉ်းစားပြီးဖြစ်ခြင်းသုံးဆယ်သည်မဟောင်းတစ်စုံတစ်ယောက်လက်ထပ်ဖို့အတွက်ပြင်သစ်။ ဒီတော့၊အိမ်ထောင်မလဲေက်ာင္းသား။ ဘူးများသောအားဖြင့်မျှော်လင့်တဲ့ရေရှည်အစီအစဉ်မှာဒီအစောပိုင်းအဆင့်။ နောက်ထပ်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်အဘို့အကြည့်အပေါ်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်နှင့်အတူအချို့သောကောင်းပါဘူးဒါပေမယ့်အများကြီးအပိုင်းအစ။ ရအချို့အကူအညီကနေအမျိုးသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်။ အထူးထူးဆန်းဆန်းမေးခွန်း၊သို့မဟုတ်သူအလွန်ငယ်ရွယ်ပြီးအတွေ့အကြုံ။ မသိဘူး၏အသက်အရွယ်၊သင်မူကား၊နားလည်သဘောပေါက်သင့်ပါသည်ဘာအယဉ်ကျေးမှု၏တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးအရာ၌သင်ခံရလိမ့်မည်ဧည့်မီကြိုးစားနေတဲ့ ရေရှည်ဆက်ဆံရေး။ လျှင်မဆိုရေရှည်ဆက်ဆံရေး။ ဤဘယ်တော့မှမပေါ်ပေါက်နေသောကြောင့်သင်ရှာနေသူတို့အဘို့အထူးသဖြင့်လျှင်၊သငျသညျမပြောတတ်၊နားလည်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အဘယ်သို့သိအလားအလာကိုယ်စားလှယ်လောင်းမျှော်လင့်။ သငျသညျဆိုပါကဆိုလိုရမ္မက်ဆက်ဆံရေးကို၊သူတို့တွေဟာမျှမျှတတလွယ်ကူသောအားဖြင့်လာရန်ပြင်သစ်တွင်ရပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနှင့်ဥပဒေမှအသက်အရွယ်နှင့်မနခ်စ္သူျအများစုအတွက်လူမှုရေးအခြေအနေ။ ဆိုရင်အဓိပ္ပါယ်က»ပြောင်းပြန်»၊သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အများကြီးအိမ်ထောင်သက်သို့မဟုတ်တစ်ခုဒွန်ယောက်ျား»ရရှိနိုင်»အတွက်နွေရာသီအခါသူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်သို့မဟုတ်အခြားရှက်များမှာအားလပ်ရက်အပေါ်သွားနှင့်အတူသားသမီး၊ဒါပေမဲ့သူတို့လိမ့်မည်မဟုတ်ရှာနေအတွက်ဘာမှအများကြီးကြာကြာထက်တစ်လမှာအများဆုံး။ ဖို့ကြိုးစားမကြည့်လိုသောဝက်မှိုင်း၏»တရုတ်မိန်းကလေး»၊အရာဆိုလိုတယ်မဟုတ်ခဲ့လျှင်သင်တကယ်ကြိုက်တစ်ခုမှာဤဘာသာ၊ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရန်သူတို့ကိုကြိုက်:အထွက်သော၊မသိချင်ဘူး၊။ ရှောင်ရှားစည်းအဝေးဖြစ်ကြောင်းအထူးသဖြင့်အဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏အနောက်တိုင်းကလူနှင့်တွေ့ဆုံရန်ရှ(သမျှကိုအကြောင်းပြချက်အဘို့:ဘာသာစကား၊အစားအစာ၊ယဉ်ကျေးမှု)။ သင်မည်မဟုတ်သေချာပေါက်တွေ့ဆုံရန်အကောင်းဆုံးနမူနာ ထွက်ရှိရလိမ့်မည်ပိုပြီးအခွင့်အလမ်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာတွေ့ဖို့တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူအဝါရောင်အဖျား။ ျသင်ကျောင်းသားတစ်ဦး။ သင်တွေ့လိမ့်မည်များအပြားအခြားကျောင်းသားများ။ သင်ကြိုက်လျှင်သင်၏အချို့တို့ကို၊သင်ချင်ပါလိမ့်မယ်၊သင်သည်သူတို့အားတဖန်ကြည့်ဖို့။ သူတို့ကြိုက်လျှင်၊သူတို့လိုချင်လွန်းသော။ ပြီးတော့သင်တို့နှစ်ဦးစလုံးဆိုပါကရချင်သို့အချို့ဆက်ဆံရေး၊သင်ပါလိမ့်မယ်။ အသေးစိတ်အချက်အများကြီးကွာအပေါ်မူတည်ပြီးတစ်ဦးချင်းစီကလူ၊ဒါပေမယ့်ခြုံငုံဖွဲ့စည်းပုံမှာအတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်၊ကျွန်တော်ထင်သည်။ အဓိကပြဿနာကမနိုင်လျှင်လူပေါင်းတွေ့ဆုံရန်အချို့အကြောင်းပြချက်များလျှင်မူကားသင်တဲ့ကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်သည်ဖို့ဖွယ်ရှိမဟုတ်ပြဿနာတစ်ခု။
ဧည့်သည်ကြီးမြတ်ရာအရပျ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်တွေ့ဆုံရန်။ အသုံးပြုတဲ့အခါသင်သည်တကျွန်းတနိုင်ငံသားတို့၏စကားပြော၊ငါတို့သည်သင်ချိတ်ဆက်ဖို့နောက်ထပ်ကျပန်းချက်တင်စာမျက်နှာနှင့်ကုန်ပြီအပေါ်စာသားနှင့်အတူအသီးအသီးအခြား။ အချက်တင်ဝန်ဆောင်မှုကိုလုံးဝအမည်မသိ၊သင့်ရဲ့ချက်တင်မိတ်ဖက်မမြင်သူ၊သင်ရပ်တန့်နိုင်တစ်ချက်တင်မည်သည့်အချိန်တွင်မ-ကအထောက်အကူပြုကြောင်းကိုသင်ဘေးကင်းလုံခြုံနေဖို့။ စကားပြောလစ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံကိုပယ်ရှား။ အဘယ်သူမျှမမှတ်ပုံတင်လိုအပ်သည်နိုင်ရန်အတွက်သုံးစွဲဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောခန်းဝန်ဆောင်မှု။ ဒါ့အပြင်၊ဒါကြောင့်သုံးစွဲဖို့အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်-ဒါကြောင့်၊ဧည့်စကားပြော။ စောင့်ရှောက်နိုင်ရန်အတွက်ရည္ဟာအဖြစ်ဝေးတတ်နိုင်သမျှ၊ကျနော်တို့လိုအပ်သောအတည်ပြုရန်မသင်သည်လူ့ဖြစ်ကြောင်းအ(ျပဳ)။ များအတွက်စိတ်မပြေ။ ကျွန်တော်ပြောနေတာကိုဤကယ့်ကိုကောင်းတဲ့မိန်းကလေးထံမှဘယ်လ်ဂျီယံဒါပေမယ့်လေ။။။။ ပဲပြောပြချင်သင်တို့ကိုငါအမှန်တကယ်သင်ကြိုက်နှစ်သက်လျှင်ကျနော်တို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မင်္ဂလာပါ ထိုင္ႏမွာ။ ကျွန်တော်သိသည်ဒါဟာအရေးမပါဘူးသင့်အဘို့အဘယ်သို့ဖြစ်ကြောင်းကို၊ဒါပေမယ့်ဒါဟာတကယ်ကိုအရေးပါသည်ငါ့ကိုမည်သို့။ ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအတွက်။ ဟေ့ဒါ၊ငါမွငါစိတ်မကောင်းပါဘူးငါချိတ်ဆက်ခဲ့သည်၊အလွန်ဆိုးသော၊ငါကြားရ၏ဇာတ်လမ်းနှင့်အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေလူငယ်အကြံပေးချက်များ၊ဒါအသနားခံ။ မင်္ဂလာပါ၊ငါပည်၊ပြီးခဲ့သည့်ညဥ့်အခါ ငါနှင့်အတူစကားပြောဂျာမန်ကောင်လေးအမည်ဖြင့်မှည့တိဗ်။ အကယ္ရောက်ရှိတိဗ်၊ငါ့ကိုအစက်စက်တလုံးထဲတွင်မက်ဆေ့ခ်ျကိုနှင့်ရှိန်း။ တစ်ခါတစ်ရံသင်ခံစားရ၏နှလုံးထိုင္ရထဲကသင့်ရဲ့ရင်ဘတ်အစုံ၊ဒါပေမယ့်လူတစ်ဦးဘယ်တော့မှမဂရုစိုက်သို့မဟုတ်သင့်ကိုချစ်အဖြစ်။ ငါရှာ။ ငါအပူတပြင်းယောက်ျားများနှင့်ငါမကြာသေးမီကပြောမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူ၊ဒါပေမယ့်ငါဆုံးရှုံးခဲ့ရဆက်သွယ်မငါသည်ဤရေးသားခြင်းဖြစ်မှအလတ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအကြား။ ဟေ့ ကျွန်တော်တို့စကားပြောတုန်း။ သင်ကကပြောသည်ငါ့ကိုအသက်ရှင်အတွက်ချဒ်။ ငါအသက်ရှင်သောအတွက်ချဒ်။ လွန်း။ ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရဆက်သွယ်တစ်နည်းနည်းနဲ့။ ငါဟို။ ကိုယ့်စကားလက်ဆုံနှင့်အတူမိန်းကလေးမှဒေ။ ဒါပေမယ့်လေ။။။။ ဟေး၊ငါအလေးကနေမွမ်ဘိုင်းရှိခြင်းဇာတိမြို့ ။ ဟေးပြီးခဲ့သည့်ညဥ့်အခါကျွန်မဟာစကားပြောနှင့်အတူအမျိုးသမီးကနေမွမ်ဘိုင်း အသက်အရွယ်ကျွန်မချစ်ရက်ပ္သူမ၏နှင့်အများကြီးဒါပေမယ့်တစ်နည်းနည်းနဲ့ဆက်။ သင်အစဉ်အကြားအဖြစ်ဆိုး၏ ဘေးပညာရှိ? ကျွန်တော်ထင်ဘူး။ ဒါဟာတစ်ဦးပုံပြင်အခမဲမယ်လို့ပြောပြပါ။ ဒါဟာရှေခြေထောက်။ ကျွန်တော်ကနတ် က်ာ္လြန္ရဟောင်းဥရောပတိုက်ကနေပိုလန်။ ငါအဘို့အရှာဖွေနေငယ်ရွယ်တဲ့ကျေးကျွန်ဖြစ်ကြောင်းစိတ်ဝင်စားသူအတွက်လုပ်နေတာ ပုံတာဝန်နှင့်ပို။ ငါတွေ့သောဒီကယ့်ကိုအေးမြလျမိန်းကလေး၊ဖော်ပြထားတဲ့မိမိကိုယ်ကိုအဖြစ်မြင်းရုံသိချင်ရင်ခင်ဗျားကိုအဆက်အသွယ်ကြောင့်။ မင်္ဂလာပါ ၊ကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သောကောင်းတစ်ဦးစကားပြောဆိုခဲ့သည့်ညကၽြန္ုပ္၏ဖြစ်ခြင်း၊ပတ္တူ။ လျှင်သင်သည်ဤသတင်းစကားကိုကြည့်ရှုပြုပြန်ကြားချက်နှင့်အနိုင်အၾကိဳက္ဆံုး ။ မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်မဖတ်ဒူမင္ကိုယ္ေပြောသင့် နဲ့ဘဝလက်တွဲဖော်ကိုရှာဖွေ။ ငါသည်လည်းဘဝလက်တွဲဖော်ကိုရှာဖွေသော်လည်း၊ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို။ မင်္ဂလာပါ၊ငါသည်တွေ့ဆုံခဲ့မိန်းကလေး ဘယ်သူကိုနှင့်အတူတစ်ကောင်းတဲ့စကားပြော၊ဒါပေမဲ့ကွန်ထခုတ်ဖြတ်။ ဒီေ။ လို့ခေါ်တဲ့လျှင်သင်သည်အစဉ်အဆက်မကျြနှာကိုပြဿနာတွေအတွက်လီ။ ငါဟာေ အိန္ဒိယကနေပြီးစကားပြော။။။။။ လုပ်ခဲ့လျှင်သင့်အပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ဒီတော့ကျွန်မပန်လျှင်ငါသည်သင်နာကျင်။ ငါမူကား။ မဂၤ ။ ဒီ ။ ကျွန်တော်တို့စကားပြောတယ်ပြတ်မှုကြောင့်အာဏာဖြတ်။ လျှင်သင်သည်ဤသတင်းစကားကိုကြည့်ရှုပါ၊သင်ပြန်ကြားချက်။ ဟေ့ပေါလု၊ မွသူသင့်ကိုငါနှင့်အတူစကားပြောမှပြင်သစ်ကပြားကဲ့သို့အမှုအရာ:ဆက်ဆံရေး၊ရည်းစား၊သင်သည်သင်၏အသက်တာ။ ဟေ့ ၊ငါတို့သည်ဆက်ဆံခဲ့ကြတဲ့ကောင်းတဲ့စကားပြောများအတွက်နာရီနှင့်ကျွန်တော် ပြတ်မှားယွင်းစဉ်တွင်ဟုကလေး။ ဒါကြောင့်မျှော်လင့်ငါတို့သည်တဖန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြမည်။ မင်္ဂလာပါ ၊ဒီ ငါမျှော်လင့်ခဲ့သည်သင်ခေါ်ဆိုမှုသို့မဟုတ်စာသားအုံးကဒူခေါ်ပေမယ့်ကိုယ့်သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုသင်ရပ်တန့်။ ဘယ္လိုမွက်ပ္ယောက်ျားနှင့်လက်စ်အမည်ရှိဗြိတိန်နိုင်ငံထံမှအသက်အနှစ်နှင့်ရုတ်တရက်ငါ၏သတင်းစကားများမပေါ်ပေါ်လာနိုင်သူတစ်စုံတစ်ဦးကူညီပေးပါ။ အလုပ္အကိုင္သူ့နာမည်ကတော့နစ်ကိုးလပ်၊သင့်ရဲ့အီးမေးလ်အ ၊နှင့်များသောအားဖြင့်သင်၏မိတ်ဆွေများသင်တို့ကိုခေါ်နစ်ခ်။ အကြောင်။ မင်္ဂလာပါရှေ့။ သင်သည်အစဉ်အဆက်တက်ပြသနောက်တဖန်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ကြည့်ရှုငါ့မည္။ ငါပဲသင်သိချင်ကြောင်းကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်ဝမ်းနည်း။ ။ ဟေ့၎င်းဂျနီဖာ။ ကျွန်တော်ပြောနေတာမှ ရှင်၊ကျွန်တော်ထင်သည်။ ငါဆုံးရှုံးခဲ့ရဆက်သွယ်ပြီးဆုံးမစကားပြောငါဒါကြောင့်စိတ်မကောင်းပါဘူး။ နိုင်။ မင်္ဂလာပါ၊ငါ့နာမကိုအ ၊ကောလိပ်ကျောင်းသားအနေဖြင့် ။ ။ ငါဖို့ကြိုးစားနေပါ၏တစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာဖွေဂျာမနီ၌နေထိုင်ဗျူးဖို့အတွက်စသည်။ မင်္ဂလာပါ ။ ငါဒါကြောင့်စိတ်မကောင်းပါဘူးကျွန်တော်ဘဲပြန်ဖြေသည်။ ငါရှာဖွေနေခဲ့ဖူးလျှင်မှားအပေါ်ငါ့ အခါသင်ဖုန်းဆက်ပါတယ်။ ငါချင်တယ်။…
ချိန်းတွေ့ပဲရစ်တွင်နိုင်တစ်စိန်ခေါ်မှုအတွေ့အကြုံ၊ဒါပေမယ့်လည်းမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပျော်စရာ။ ပြင်သစ်အချစ်ဖို့ရောခဲ့လျှင်သင်မှန်သင့်ရဲ့ကတ်များ၊သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးကခရီးဦးကြိုပြုတော်တော်များများဘယ်နေရာမှာမဆို:အ ၊တစ်ပါတီ၊တစ်၊နှင့်၊ဤအမှု၌၊အဘား။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရဖို့တစ်ပိုင့်သို့မဟုတ်လောင်းအခြားစပျစ်ရည်ဖန်၊ဒီနေရာမှာပထမအတွက်အသစ်တစ်ခုစီးရီးအကြံပေးချက်များနှင့်အတူယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့အဘို့ရှင်သန်ရေးနဲ့အောင်မြင်မှာပဲရစ်ချိန်းတွေ့မြင်ကွင်းတစ်ခု။ ကျွန်မဖတ်တာနဲ့ပြင်သစ်အမအတွက်အရက်ဆိုင်မှငါ့အတွေ့အကြုံသည်ဤအဖြစ်မှန်၊သို့သော်၊ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်သောပြင်သစ်အမျိုးသမီးများဖြစ်စေခြင်းငှါအနည်းငယ်အအေးနှင့်အဖို့ခက်ခဲကွဲသောဦးဆောင်ခဲ့ပြီးမှဒီသီအိုရီ။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်လည်းနှုတ်ကပတ်တော်ကို၊ကြောင်းမှန်သည်ပြင်သစ်ဘူးရက်စွဲအစဉ်အလာသဘောကိုဗမာစကား၊သို့သော်ငြားလည်း၊သူတို့ကစားဂိမ်း၏အသှေးနှင့်အကြိုးစားခဲ့နှင့်စမ်းသပ်ပြီးချဉ်းကပ်အောက်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်အပေးအသစ်ဖုန္းနံပါတ္မ်ား။ မှတ်ချက်၊ဤလမ်းညွှန်သည်လျော့နည်းများအတွက်ကလပ်အသင်းဖြစ်သော၊ကောင်းစွာပြီးနောက်၊အချို့သောအစောပိုင်းနံနက်ယံ၌နာရီ၊စိမ္းဖြစ်ပျက်ထက်ပိုပြီးအလွယ်တကူအစည်းအဝေးတစ်စုံတစ်ဦးချိန်းတွေ့နှင့်အတူအလားအလာ။ အောက်ခြေမှာဖြစ်ကြောင်းအထွေထွေအကြောင်းသိကောင်းစရာများနှင့်အများ၏စာရင်း ပရော-ဖော်ရွေ။ ကသောကြာနေ့ညဥ့်အခါ၊သင်ဘာသာျပန္ခ်က္ပေါ်တွင်တင်အချို့သောကောင်းတဲ့အဝတ်ရန်အဆင်သင့်ရရန်အတနင်္ဂနွေနှင့်အတူစတင်ရန်သင်၏လမ်းညွှန်ချက်နှင့်မ့်င္ထား၏ထွက်အချို့အ ရန္ကုန္အေ။ သတိထားမိလားတော့တစ်စုံတစ်ဦးစူပါၡမ်ားအနှံ့။ သင်သည်အဘယ်သို့ပြုပါ။ သင်လိုအပ်သူတို့အားသိစေ။ မဟုတ်လျှင်သင့်ရဲ့ပစ်မှတ်လက်ဆောင်အဖြစ်သာ ၊သူတို့ရောက်ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်အချို့၏နိမိတ်လက္ခဏာသင်သည်သင်၏ချစ်ဆွဲငင်။ သူကပြောပါတယ်၊သိမ်မွေ့၊မချက်ချင်းခုန်မိမိသွားရာလမ်းသို့မဟုတ် ဆင်းဧင့်၏ဘီယာများ၏ရှေ့မှောက်၌သူမ၏သည်။ သင်အောင်မြင်မှာဂျက်လေယာဉ်ဆံဖျား။ အမ်ိဳးကြပါဘူးကျေးဇူးပြုပြီးစေ့စေ့၊သို့မဟုတ်သူမရလိမ့်မယ် ။ ထက်ပိုဆိုးဘာမှမရှိဘူးရဲ့တစ်ငရဲကြ်န္မမျက်စိသည်သူ၏သားကောင်။ ငါများသောအားဖြင့်အထင္လဲြရှောင်ကြဉ်၌ရှာဖွေနေကောင်လေးရဲ့ဦးတည်ချက်အခါငါခံစားရအောက်တွင်သူ၏စိတ်ကျေနပ်။ ကြည့်သူမ၏ဦးတည်ချက်ရံဖန်ရံခါ၊သူသတိပြုမိလိမ့်မည်ကိုရွေးချယ်သို့မဟုတ်မဖြည့်ဆည်းသင့်အကြည့်။ အမျိုးသမီး၊သင်အာရုံတစ်စုံတစ်ဦးစစ်ဆေးနေသင်သည်ထွက်ကြိုးစားရဖို့ကောင်း၏ကြည့်အပေါ်လိမ်လျှင်မြင်ရဖို့စိတ်ဝင်စားစေခြင်းငှါအလိုလဲလှယ်ကိုတွင် တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူသင့်ရဲ့ရင္း။ ပြီးတာနဲ့မျက်စိဆက်သွယ်ခဲ့ပြီး၊ကိုင်ဘူးသူတို့ရဲ့အကြည့်အဘို့အရမ်းရှည်လွန်းမဟုတ်၊အကြောင်းပထမဦးစွာတဦးတည်း။ ကွာကြည့်ရှုပြီးရင်မိနစ်အနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းနှင့်အမီလိုက်ရန်ကြိုးစားသူမ၏မျက်စိသည်နောက်တဖန်။ ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ပယ်ရှားသင်ရှိသည်လိမ့်မယ်ဖမ်းဆီးရမိသူမ၏အကျိုးစီးပွားနှင့်စတင်အရွံုး။ အခါသင်သိမ်းဆည်းရမိသူမ၏မျက်စိဒီစက္ကန့်အချိန်၊သင်သော့ခတ်နိုင်တယ်၊သူမ၏အကြည့်အဘို့အနည်းငယ်ပိုရှည်။ ဤအချိန်တွင်၊အမျိုးသမီးပေးချင်စေခြင်းငှါအပြုံးတစ်ခု၊ဒါကြောင့်ဖြစ်သင့်အဖြစ်သာအသေးစား။ သူမမရှိပါဘူး၊လူကိုအနိုင်မပေးရသေးသေးလိမ်အၿပံဳး။ အလွန်သေးငယ်သည်၊ဒါပေမယ့်လုံလောက်တဲ့သူမ၏အဘို့မြင်မှသင်အမှန်ပင်စိတ်ဝင်စားကြောင်းပထမဦးဆုံးအချက်မဟုတ်ခဲ့။ မျှော်လင့်သူထို့နောက်ပြန်သင့်။ သူသည်ကျွနု်ပ်လျင်မြန်စွာကွယ်ပျောက်မပါဘဲပြုံးကြောင်းဖြစ်ကောင်းနည်းလမ်းများတက်ပေးသင့်ပါတယ်။ သို့သော်၊သူမနှင့်တွေ့ဆုံသင့်အကြည့်တစ်စက္ကန့်အချိန်၊နှင့်စောင့်ရှောက်တစ်စက္ကန့်အဘို့၊ပင်မရှိဘဲအၿပံဳး၊အဲဒီအတိအကျအလားအလာ။ သူမသည်အနိုင်ကစားနည်းနည်း ၊သူမကပင် လျစ်လျူရှုသင်အနည်းငယ်အစဉ်၊ပေးသောအချိန်မှအစီအစဉ်၏နောက်ရွှေ့။ ကောင်းပြီ၊သင်ဘာသာျပန္ခ်က္ခု စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားသူတို့ဆွဲဆောင်မှုရှိစေခြင်းငှါအပြန်အလှန်ဒါပေမဲ့သူသို့မဟုတ်သူသည်သင်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်ကပ်ဖြတ်ပြီးအခန်းသို့မဟုတ်ပိတ်ဆို့နေတဲ့အခံ၏။ မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ လျှင်ယ့်ကိုသင်တို့အားစကားပြောစေချင်တယ်၊သူမတွေ့ပါလိမ့်မယ်တစ်လမ်းမှအခမဲ့မိမိကိုယ်ကိုတက်။ ဒါဟာယူစေခြင်းငှါအနည်းငယ်အချိန်၊ဒါကြောင့်စိတ်ရှည်ရှည်ဖြစ်။ ဖြစ်နိုင်လျှင်၊ကိုယ်တိုင်အလွယ်တကူလက်လှမ်းမီနှင့်ဖြစ်နိုင်လျှင်၊အနည်းငယ်ပိုမိုနီးကပ်သည်အဘယ်မှာရှိ။ လဖိုင်သင့်လစ္ေရေချိုးခန်းသို့မဟုတ်ကိုပူဇော်ရန်အဘို့အသွားလာမည့်ပတ်လည်အချိုရည်။ လျှင်မသွားဖို့ပဲရစ် ၊မလိုက်နာသူမအပေါင်းတို့သည်လမ်းရှိနေရာကိုယ်လမ်းကြောင်းကိုအတွက်သူမ၏ပြန်လာ။ ငါခဲ့ကြအံ့သြ ပြင်ပတွင်ရေချိုးခန်းအပေါ်အများအပြားအခါသမယတွင်၊နှစ်ဦးစလုံးပျော်ရွှင်အံ့သြဖွယ်အားဖြင့်မ့ချင်ပါတယ်ကစားနည်းနည်းကြောင်နှင့်မောက်စ်နှင့်အတူ။ သို့သော်၊တစ်ချိန်ကငါသည်ထွက်ရေချိုးခန်းတင်းကုပ်များတစ်ခုမျှသည်-လွန်း-ဘုံပဲရစ်ညွှတ်ရေချိုးခန်းနှင့်အလာနှင့်အတူမျက်နှာဤကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသောသောကောင်လေးင့်မျက်စိကျခဲ့ကြကျွန်မကိုအနှံ့ကနေဆိတ်ငြိမ်။ သူသည်မုချအောင်မြင်မှာအံ့သြစရာအချက်တစ်ချက်သော်လည်း၊ဆင်းရဲဗီးသာနိုင်»ဟုပြောကြသည် လှပသော»ဗမာထဲတြင္နိုင်ဘူးပင်မေးဖို့အဘယျသို့အကြှနျုပျကိုငါ့နာမကိုတာ္ဖုန္းနံပါတ္။ ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက် နှင့်အပြုံးမှာအသီးအသီးအခြားအားဖြင့် ရှည်လျားသောနှုတ်ဆိတ်နိုင်သည့်အသာနားထောင်ငါ့အားဖြင့်ပြော နှင့်ချော်ပြန်ထပ်။ ဆိုရင်ကံကောင်းခြင်းအတွက်၊သူမရှိသည်လိမ့်မယ်အဘားအဲဒီအစား၊တစ်ဦးပြီးပြည့်စုံခြင်းနှင့်အများကြီးပိုဘေးကင်းရာအရပ်မှစကားလက်ဆုံတက်ဒဏ်ခတ်မျှော်လင့်အတွက်အပြန်အလှန်ပြောပြီဘာသာစကားဖြစ်တယ်။ ကောင်းစွာ၊ရုံတစ်လိုင်းတည်း။ ေပဲရစ် ၊ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနေဖို့၏မွတ္သားကောက်-အပွင့်လိုင်း၊မိန္းမသူမလာလျှင်သူမဒီမှာမကြာခဏ»သို့မဟုတ်သူမရှိပါတယ်အချိန်။ သင်ပြုသမျှကို၊မကြေညာသင့်ပျောက်ချစ်သောသူသို့မဟုတ်ကြည်ညိုလေးစားပထမဦးဆုံးလိုင်းများတွင်။ သင်မသိရပါဘူး၊သူမ၏လမ်းမရှိမယ့်သင်နှင့်အတူမေတ္တာ၌သူမ၏သေး။ တူစိုက်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သော၊ပေးလှူလည်းအများအပြား ၏မေတ္တာညာဘက်လင်းနို့ဖြတ်နိုင်ပုံပေါက်ကယ့်ကိုအပေါ်ယံသို့မဟုတ်လွန်းစိတ်အားထက်သန်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊သင်ပြောပြချင်ပါတယ်ခဲ့လိုစကားပြောကတည်းကတြ၊ကၡမ်ား။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဲ့သို့အနည်းငယ်မော့သည်၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ချင်ပါဘူးနစ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်၊သင်ရုံပေးခြင်းအားသူမ၏အထက်လက်အရင်ကထင်၊သူမ၏အစွမ်းကုန်ဆည်းညာဘက်လင်းနို့ဖြတ်။ အမျိုးသမီး၊သင်ခံစားနေရတဲ့အပြုသဘောကောင်လေးအကြောင်း၊ပွင့်လင်းဖြစ်ဖို့သူဦးဆောင်။ ဆင္းရှက်၊သင်သည်သင်၏ကြိုးစားအားမပေးချွတ်အအေးပခုံး။ သင်မယ်နှစ်ဦးစလုံးကိုယ်ပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်အတူပြုံးနဲ့လဲလှယ်အချို့ဖော်ရွေသောစကား။ ပြင်သစ်အမျိုးသားများအလွန်အမင်း ၏မကြောက်ပါနဲ့ဒီဒါပေမယ့်မှတ်မိဖို့ယူသူတို့၏စကားသည်နှင့်အတူအချို့သောတိ။ သဃစကားေျမှာသူမ၏အဘားတန်းကို၊ပူဇော်ဖို့အသောက်။ သငျသညျဆိုပါကပြန်လည်တွေ့ဆုံဖြစ်ခဲ့ပြီးအခြားအစိတ်အပိုင်းများ၊ဘားနေဆဲ။ တစ်နည်းနည်းဖြင့်၊သင်အမှတ်ရပါဖြစ်ခြင်းများအတွက်လူကြီးလူကောင်း၏မူလည်းရှည်၏။ ေနိုင်ငံခြားပါဘူး၊ပြင်သစ်ယေဘုယျအားဖြင့်ပိုပြီး၊ဒါကြောင့်ဝတ်စုံကိုနောက်သို့လိုက်လျှင်သင်ဂိုးသွင်းချင်ကိုယ်စားလှယ်တဦး။ တစ်ချိန်ချိန်သင်လိုအပ်မယ့်လုပ်နေဆုံးဖြတ်ရန်သင်ဘာလိုချင်ထွက်၏။ လျှင်သင်အဘို့အရှာဖွေနေခဲ့ကြအနည်းငယ်အရေးယူ၊သူမ၏အခြားအသောက်(နှင့်အခြား)။ ဒါပေမယ့်လို့မရပါကသူမ၏ကြည့်ဖို့အဘို့နောက်တဖန် အိမ်၊စကားသွားအဖြစ်ကြာမြင့်စွာကဟန်အဖြစ်သဘာဝအလျောက်။ အကောင်းဆုံးကတော့သင်ရှာတွေ့စေခြင်းငှါအရာတစ်ခုခုအတွက်သုံးသောအသုံးပြုနိုင်တယ်ကဲ့သို့အကြောင်းရင်းအတက်တွေ့ဆုံရန်အမြန်ဆုံး:တစ်ဦးကဖျော်ဖြေပွဲရုပ်ရှင်၊တစ်အသစ်ခေတ်မှီဘားသင်ချို့တဲ့ခဲ့တာထွက်ကြိုးစားဖို့။ အားလုံးသည်ကောင်းမွန်သောအခြေဖလှယ်ဖို့နံပါတ်များ၊သင်ဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်။ ပြင်သစ်အမျိုးသားအားမကြာခဏမဟုတ်ပါဘူးအလွန်အမင်းရှက်ဖို့ရုံရှေ့ဆက်သွားနှင့်အကြံပြုအစည်းအဝေးတက်လသပြိုကွဲလုနီးနီး။ မင်းမပထမဆံုးစကား၊မဟုတ်လျှင်၊သင်သဘောပေါက်သင့် အရ-သွား။ အလွန်ကြီးစွာသော၊အခုသင်ရတယ်သူမ၏အရေအတွက်ကို၊သင်သည်အဘယ်သို့ပြုပါ။ ကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှုများအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ဒါပေမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရပြောရမယ်၊ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့အမည္စောလွန်းသို့မဟုတ်နောက်ကျလွန်း။ ငါလက်ခံရရှိစာသားမက်ဆေ့နီးပါးချက်ချင်း။ မကောင်းတဲ့စိတ်ကူး။ ဒီပြသင့်သန်လွန်း။ သူမထင်းရှူးကျော်သင်အနည်းငယ်။ မဟုတ်လျှင်သင့်ရဲ့အကြံပြုချက်ခဲ့ကြည့်ဖို့အသီးအသီးအခြားအနက်ဖြန်နေ့၌(အခြားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့စိတ်ကူး၊ဒါပေမယ့်ဖြစ်နိုင်သည်လိုအပ်ခင္ဗ်ားဟာမြို့မှာတနင်္ဂနွေအဘို့၊ဥပမာအားဖြင့်)သူမအမည္အဘယ်သူမျှမအလျင်-နာရီကြာလေပိုကောင်းလေမီ နာရီ။ သင်ပြုသမျှကို၊မစောင့်ပါနဲ့တစ်ပါတ်ထက်ပို။ မိန်းကလေးများသာအချိမျှကြာမြင့်စွာအဘို့၊တစ်ပါတ်ပြီးနောက်၊ကျနော်တို့စဉ်းစားပါလိမ့်မယ်မဟုတ်ပါဘူးတကယ်စိတ်ဝင်စားရှာနေစတင်။ တခါကျွန်မအောင်မြင်မှာအားလုံးအထက်ပါအဆင့်များနှင့်အတူဤချစ်စရာပြင်သစ်ကောင်လေးခဲ့ချင်ပါတယ်အမြင်အာရုံရောပမှာအစည်ဘား၊ငါသွားရာလမ်းကိုရဖို့အသောက်မှာဘားငါအထင္လဲြတိုက်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း၌ပြန်ထားပေါ်လမ်းလျှောက်(အပိုဆောင်းအောင်မြင်သောအစွန်အဖျား။)။ ငါတီပင်ရှိသည်ဖို့အချိန်နေရာငါ၏အမိန့်ကိုငါကြည့်ကျော်မှသူ့ကိုရှာတွေ့ကျွန်မနားမှာ။ သူကစကားေျနှင့်အတူငါ့အဘို့တောင်းငါ့အရေအစားအလျင်အမြန်ဖြစ်သူကမိမိသွားရာလမ်းကိုအပေါ်ထွက်။ သူကတောင်ကပြောပါတယ်သူငါ့ကိုဖုန်းခေါ်ပေးမည်ကိုအလွန်နက်ဖြန်နေ့၌။…
ကျနော်တို့ရင်းစပျစ်ရည်ကိုတစ်ဖန်ခွက်ဖြင့်ရေကန်ဒီမွန်းလွဲပိုင်းတို့တွင်ကောင်မလေးအကြောင်းပြောနေတာယောက်ျား-တခြားအဘယ်သို့ဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြော။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့၊ကျနော်တို့ပြင်သစ်နိုင်ငံအတွက်-အခါနောက်ဆုံးအထိအဘယ်ကြောင့်ငါ့ကိုများမှာပြင်သစ်အမျိုးသားဒီတော့တွန်းလှန်။ ငါထင်သောအမျိုးသမီးအများစုဟာကျွန်တော်နဲ့သဘောတူမှာပါတဲ့အင်္ဂလိပ်ယောက်ျားအကြောင်းသူတို့ကိုတွန်းလှန်။ သူတို့မဖြစ်စေခြင်းငှါအများဆုံးချောမောသောသူ၊ဒါပေမယ့်သူတို့ကချိုနှင့်ချစ်။ သို့သော်လည်းအဘယ်သို့ကြောင့်အင်္ဂလိပ်အမျိုးသားဒါကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောအခြားဥရောပသို့မဟုတ်အမေရိကန်။ ဒီမှာအဖြေကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ မွေးဖွားအတွက်ပဲရစ်အတူထိုင္တဲ့အပြာရောင်မျက်လုံး၊ဗင်းဆင့် သည်ကြယ်ပွင့်၏။ နာမည်ကြီးအတွက်သူ့ရဲ့ခက်ခဲတဲ့ကောင်လေး၏အခန်းကဏ္ဍနှင့်မျိုးစုံရွေးချယ်မှု၊အစဖြစ်ခြင်းများအတွက်လူသိများမော်နီကာ ရဲ့ခင်ပွန်းသည်က၊သော်လည်းသူတို့ကွဲကွာပြီးနောက်တွင်နှစ်ပေါင်းအတူတကွဖြစ်ခြင်း၏။ သူလူသိများသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအားဖြင့်သူ၏ရုပ်ရှင်ဖျော်ဖြေပွဲတွင်သမုဒ္ဒရာရဲ့တကျိပ်နှစ်နှင့်သမုဒ္ဒရာရဲ့ဆယ်၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်။ သာအသက်အနှစ်၊ သားနှင့်နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်းသား၏အခန်းကဏ္ဍမှစော် အပေါ်စော် ၏မူလအစမကောင်းသောသူသည်ပြဇာတ်။ သူလည်းလူသိများနိုင်ငံတကာမှကျေးဇူးတင်စကားသူ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအပေါ်စိန့် ။ သူကလည်း»မျက်နှာ»၏ ရဲ့အမွှေး ။ ကျွန်တော်သိသည်၊ဒီကတကယ်တော့ထူးဆန်းတဲ့အသြင္။ မကန်း၊မထင်မိပါဘူးရတ် အဖြစ်အလှအပကွန်၊ကျွန်တော်သိသောအဘယ်သူမျှမအားဖွငျ့တစ်ဦးချောမောသူရဲကောင်းလျှင်မူကားသင်သည်အစဉ်အမြဲသူ့ကိုမြင်ကစား ႏ(ပြင်သစ်အတွက်မူရင်းဗားရှင်း)ဘယ်ကြောင့်သင်နားလည်လိမ့်မည်ရှိခဲ့သည်မဘို့အပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ရွေးချယ်မှုအဆိုပါဇာတ်ကောင်နှင့်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှလောက်များစွာသောအမျိုးသမီးများမှာအရူးသူ့ကိုနှင့်ပတ်သက်။ ကိုယ့်နားကိုအဆိုပါဗီဒီယို၏ စကားပြောသူ၏ချစ် ။ တူသူမ၏ခံစားရပါလိမ့်မယ်သင့်ရဲ့ဒူးထောက်သွားလို့ဂျယ်မှာတိုးတိုး၏ နှင့်သူ၏အဆင်းလှသောစကားသည်။ တစ်ဦး၏ပြင်သစ်ဓာတ်ပုံတစ်စု၏အနည်းငယ် မယုံနိုင်လောက်အောင်ချောမောလိပ်သရုပ်ဆောင်။ အခုတောင်မှအသက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်၊နှင့်သင်တွေ့မြင်နိုင်သည်အတွက်သူ့ကိုသူ၏နောက်ဆုံးရုပ်ရှင် ပါ၊သူဟာကစားဂျူးလီယပ်စကဲသာ။ ပေမဲ့မွေးဖွားအတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ဖာစဉ်းစားသည်ပြင်သစ်မင်းသား။ သူဟုကိုးကားခဲ့ဆုံးရှုံးမနှင့်အတူနိုင်ငံနှင့်ပြင်သစ်နိုင်ငံအတည္ျခင္ဗ်ာ။ ဗင်းဆင့်ဖာအချိုင့်၊အထူးခြားဆန်းပြား-ကြည့်သူ့ကိုနှင့်ပတ်သက်လျှင်သင်နားထောင်ဖို့သူ့ပြင်သစ်တွင်၊သင်ရုံကဲ့သို့အရည်ပျော်ရေခဲမုန့်။ တယောက်ကိုငါ့အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်သူသည်အဘယ်အင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူဖခင် အလ ‘။ တူ ပြန်လည်သုံးသပ်:ရုပ်ရှင်အရာလြှံပြည့်ဝနှင့်အတူအံ့သြဖွယ်မိသားစု ၊သေခြင်း-အိပ်ရာ၊အဆိပ်သင့်စာအုပ်တွေ၊လိင်၊ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်ကျွမ်းကျင်သူရှုခင်း။ ခပ်သိမ်းသောယခုအချိန်တွင်ဝိုင်အမ်၊တိုင်းသရုပ်ဆောင်တတ်သူ။ အထူးသဖြင့်အကောင်းရှိသဗင်းဆင့်ဖာဖြစ် ပူရဲ့သွေးချစ်၊လမှဲ့။ ‘။ ကျမ်းသို့မဟုတ်ဘကျမ်း၊ငါ့အကြိုက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပြင်သစ်အဆိုတော်။ သူကကိုယ့်အပေါ်ပြီးပြည့်စုံသောအခန်းကဏ္ဍမှပြန်လာအတွက်ပြင်သစ်ဂီဟာသ»ရော်ဘင်လယ်»။ သူလည်းသိသည်သူ၏ကြီးမားသောနှလုံးဖြစ်သူ အလွန်ကြီးစွာသောထောက်ခံသူများအကြောင်းတရားများအထူးသဖြင့်အထောက်အပံ့နှင့်သားသမီးပရဟိ။ မူပိုင်ခွင့်ဟိုစာမျက်နှာ ။ နှင့်သက်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင်။ အခြားထုတ်ကုန်များနှင့်ကုမ္ပဏီအမည်များကိုပြသစေခြင်းငှါ၊ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဟာသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင်။ ဟိုစာမျက်နှာအဝန်ဆောင်မှုအမှတ်အချာကျြနှာ၊။ ဟိုစာမျက်နှာနှင့် (စာရေးဆရာ)မေဝင်ငွေဝင်ငွေအပေါ်ဤစာမျက်နှာပေါ်အခြေခံပြီးတွဲဖက်ဆက်ဆံရေးနှင့်ကြော်ငြာများနှင့်အတူမိတ်ဖက်အပါအဝင်အမေဇုံ၊ဂူ၊နှင့်အခြားသူများ။ အသုံးပြုသူတစ်ဦးအဖြစ်အယ္ငယ္န္၊သင့်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်အပေါ်အနည်းငယ်အမှုအရာ။ ပေးတဲ့ဝဘ်ဆိုဒ်ပိုကောင်းအတွေ့အကြုံ၊ဟိုစာမျက်နှာများကိုအသုံးပြုသည်ကြတ္ကီး(နှင့်အခြားအလားတူနည်းပညာ)နှင့်စုဆောင်းစေခြင်းငှါ၊၊နှင့်မျှဝေပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်။ ယခုရွေးချယ်သောဒေသများ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုသဘောတူခွင့်ပြုချက်ကိုမှကျွန်ုပ်တို့၏။
အရူးအရှိန်အဟုန်၏အသက်၊အလုပ်၊မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများ၊အားကစားရုံ၊နောက်တဖန်အလုပ်ကလူတိုင်းအတွက်အချိန်ကိုရှာဖွေရန်အကျွမ်းရမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူ။ ကိုရယူပါမှအဘယ်မှာရှိကျွမ်းနှင့်အတူသူမ၊ဘာကိုမှပြော၊ဘယ်လိုပြော။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုစားသုံးမျှလောက်သောစွမ်းအင်အများအပြားယောက်ျားပဲ ခုံပေါ်တက်ပြီးတိုက်ရိုက်တိတ်ဆိတ်တဲ့လူပျိုကြီးဘဝ။ သို့သော်၊တဦးတည်းသက်သေပြဖို့လမ်းရိုးရှင်းအရာအားလုံးကိုကျွမ်းရမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူအင်တာနက်ပေါ်မှာ။ ငါအလောင်းအစားသင်အချိန်အများကြီးဖြုန်းအမျိုးမျိုးပေါ်လူမှုရေးကွန်ရက်များ၊ဗိုင်းရပ်စ်ဆိုဒ်များနှင့်ဖတ္ရႈျပေမယ့်အဲဒီအချိန်ကသင်ရှိသည်နိုင်အကြိမ်တွေ့ဆုံပြီးသား။ ထိုသို့ပြုမှဘယ်လိုကြင်၊သပ်သပ်နှင့်အောင်၏တူကမကြည့်ပါဘူးမှိုင်းခွဲ၊ငါကသင်ပြောပြအတွက်ဤဆောင်းပါး။ ဒါဟာအရေးမပါဘူးထင်လျှင်အကြောင်းရရန်မည်သို့အကျွမ်းနှင့်အတူမိန်းကလေးတစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုဒ်သို့မဟုတ်လူမှုရေးကွန်ရက်မှာအမြဲတင်ပေးပါ၏။ သူတို့ဖြစ်သင့်၏အရည်အသွေးကောင်း၊မမေးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဓာတ်ပုံဆရာသူအကျွမ်းတဝင်မှဓာတ်ပုံကဲ့သို့သူတို့ကိုသင်ရုံရိုက်ချက်များအတွက်တစ်မဂ္ဂဇင်းအဖုံး။ တစျခုကိုအောကျမေ့နေ့မှာတွေ့ဆုံဖို့အတွက်အမှန်တကယ်အသက်တာနှင့်သူမ၏မျှော်လင့်ချက်များလိမ့်မည်လွန်းမြင့်မားသည်၊နှင့်အသင်ခံရလိမ့်မည်ကနေနည်းနည်းကွဲပြားခြားနားသော။ လည်း၊သင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးဖန်တီးပေးအယ်လ်ဘမ်နှင့်အတူအတုံးအမည်များ၊ကျွန်တော်၌ရှိကြ၏သဘောသဘာဝ၊့မွေးနေ့နှင့်တော့။ စေအနည်းငယ်အဓာတ္ပံုမ်ား၊ဒါပေမယ့်မတ်စောက်သော။ လျှင်ထိုကဲ့သို့သောသင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး၊ထို့နောက်ကင်းကင်းသွားဖို့နိုက်ကလပ်အဆီရှိပါတယ်ဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၊၊အစဉ်အမြဲအလုပ်လုပ်ကိုင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဓာတ်ပုံဆရာ။ ထိုအခါကိုယ့်ကိုရှာသင့်ဓာတ်ပုံဆိုက်ပေါ်တွင်နှင့်ဝန်အသစ်တစ်ခုကိုစက်ဝိုင်းသင်ပြီးသားရှိသည်။ ကောင်းစွာ၊သို့မဟုတ်မေးမြန်းခြင်းမိတ်ဆွေတစ်ဦးဓာတ်ပုံဆရာကိုအောင်သင်သည်သင်၏ဓာတ်ပုံ။ အဘယ်သူမျှမလိုအပ်ဆေးသုတ်ဖို့ရှိပါတယ်သင့်ရဲ့တစ်ခုလုံးကိုရုပ်ပုံသို့မဟုတ်ရယ်စရာဇာတ်လမ်းအတိတ်ထဲကနေ။ သတိရ အညီအခွက်တဆယ်၊ဒါကြောင့်အကြောင်းရေးသားကိုယ်အတတ်နိုင်ဆုံး၊အကျဉ်းချုံးနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာ။ သငျသညျအဘယျသို့အရေးအကြောင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီလိုအချက်အလက်မိန်းကလေးသင့်စာမျက်နှာကိုအပေါ်မြင်ရကြလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်၊၏အခြေခံပေါ်မှာဒီ၊သူမကိုထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ်သူမ၏ကနဦး။ ကြိုးစားရသူမစိတ်ဝင်စားနှင့်ချိတ်ဆက်ရေး၊အနည်းငယ်နှိုးဆော်၊ဒါကြောင့်သူမတစ်ဦးအလိုဆန္ဒသင်မေးသောမေးခွန်းများနှင့်ဆက်လက်။ ဥပမာအားဖြင့်:အိုးအားလုံး)၊လိင်အဘို့ငွေကိုမကမ်းလှမ်း၊ဒါကြောင့်မသည်သာရှုပ်ထွေးနှင့်အတူဤဥပမာ၏အဘယ်အရာကိုသင်နိုင်ရေးအတွက်ကော်လံသင်ကိုယ်တိုင်နှင့်ပတ်သက်။၊နှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားတစ်အကြောင်းအရာကို ရေးထားအပေါ်အကြှနျုပျ၏ကိုယ်ရေး။ နားလည်၊သင်၏အပျက်သဘောဆောင်မလိုအပ်ပါဘူးမည်သူမဆိုဘူးတည်ဆောက်သင်ကိုယ်တိုင်ထံမှသင်သည်အဘယ်အရာကိုတကယ်မဟုတ်ဘူး။ ကြောင့်အနှေးနဲ့အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းသင်ဆဲရှိသည်ကိုမျက်ချွတ်ဒီမျက်နှာဖုံးမှ။ အဘယ်သူမျှမမြင်ရကြလိမ့်မည်သင်၏ပုံရိပ်ကို၏စူပါ-ခက်ခဲတဲ့ကောင်လေးဒါမှမဟုတ်ပစ်ကပ်မာစတာရှိပါတယ်လုံလောက်ဆင်တူသူရဲကောင်းများအင်တာနက်ပေါ်မှာ။ သင်ဆဲပါကဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူချင်ကျွမ်းရမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူအင်တာနက်ပေါ်မှာနဲ့ချိတ်တယ်၊အဖြေကအလွန်ရိုးရှင်းပြီးကိုယ့်ဟာကိုယ်ဖြစ်။ နိမ့်ဆုံးမှာ၊ဒါကြောင့် ။ သင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးမှအချို့ပုံပြင်များ၊စကားမပြောနိုင်သောကစားအခန်းကဏ္ဍနှင့်စေသာထာဝတင်းမာ။ ငါ့ကိုယုံကြည်၊ထိုသို့လူအပေါင်းတို့သည်ခံစားခဲ့ရကိုသံုးပါ။ ဒါကြောင့်၊သင်မည်ကဲ့သို့ဖြေလျော့အဖြစ်တတ်နိုင်သမျှ၊သင်ကိုယ်တိုင်အတွက်ယုံကြည်အဘယျသို့အခြားသူဘူးတဲ့မိန်းကလေးလိုအပ်ပါတယ်။ အဓိကအရာမမှတက်လှိမ့်ဖို့ ။ သင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းအရာကိုသင်နဲ့အတူသင့်မိဘများသို့မဟုတ်မိတ်ဆွေများ။ သတိရသင့်ရည်မှန်းချက်သည်အကျိုးစီးပွားကိုမိန်းကလေး၊နှင့်အခြားအသွင်အဆွေခင်ပွန်း။ ဘယ်လိုအအွန်လိုင်းရေးသားဖို့။ မဂၤလာပါ၊မွာ၊အာင္ ကျွန်မတို့သိကျွမ်းရ၊အလှအပ၊အဘယ်ကြောင့်မသင်ကအိပ်ပျော်နှင့်အခြားခွဲခြား။ အားလုံးဤစာပိုဒ်တိုများရှိခဲ့ရာနှစ်သားနှင့်အသင်ပင်မြင်ရ၏ကြီးစွာသော-အဖွား။ မိန်းကလေးများအစဉ်အမြဲချင်တယ်အသစ်အဆန်းပါ။ မလိုအပ်ဖို့အချို့မူရင်းလမ်းကြိုးစား၊ယောဂ၊အကျိုးစီးပွား။ ဒါကြောင့်လုံးဝအရာအားလုံးကိုကြွလာ။ နိုင်ရန်အတွက်ထိုးထိုးထွက်ရပ်နေကိုနောက်ခံဆန့်ကျင်အပေါင်းတို့သည်အခြားယောက်ျားတွေအဘယ်သူသည်သူမ၏လွှတ်မျိုးမျိုး၊ဟင်းသီးဟင်းရွက်၏လုံလောက်သောဖြစ်ရေးသားဖို့သာမန်သာမန်စာပိုဒ္တို-ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်။ ဒီနေရာမှာ၏ဥပမာတစ်ခုအဘယ်သို့ငါရေးလိုက်:၊သူနိမ့်ပြီး၊အမွှေးမိန်းကလေး၊ဒါကြောင့်သင်ပြန်လည်ၡမ်ားဟောင်း၊နှင့်အဘယ်သို့ငါပြုနှင့်အတူ၊ဘယ်လိုအကဲ၊ဘယ်လောက်အညဦးယံအဝင်၊ကျွန်မခင်ပွန်းဒီနေရာမှာကိုယ့်အပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်နိုင်သူမ၏ဇာတ်ကောင်သို့မဟုတ်လိင်စိတ်အားဖြင့်စီရင်ဓာတ်ပုံသို့မဟုတ်ပဲ ။ အောက်တွင်ဖော်ပြထား၏စုံတွဲတစ်တွဲငါ့ဥပမာအဟောင်း။ ပင်လျှင်ယခုသင်ပြိုင်နက်ဆက်သွယ်နှင့်အတူတဆယ်၊ထိုအခါသူတို့ကိုအသီးအသီးခံစားသင့်ပါတယ်လျှင်အဖြစ်သူမသင်တို့တည်း။ သူတို့တစ်ဦးစီက၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဇာတ်ကောင်စရိုက်များ၊ဝါသနာ၊အသက်တာ၏တစ်လမ်း၊ဆိုလိုတာက ထိုချဉ်းကပ်မှု၏အသီးအသီးတို့ကိုရမည်အကြည့်အတွက်သာအထူးနဲ့ထူးခြားတဲ့နည်းလမ်း။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်း။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအာရုံစူးစိုက်မှုလိုပေါ့အမျိုးသား၊ဒါကြောင့်ဖို့ကြိုးစားနှင့်သူမ၏အကျိုးစီးပွားအတွက်သူမ၏အဖြစ်အများကြီးဖြစ်နိုင်မထင်သာအ ။ အားလုံးမိန်းကလေးများကိုယ့်ချစ်ခံရဖို့ဓါတ်ပုံစြ၊ပရော်ဖက်ရှင်နယ် မှဓာတ်ပုံဆရာ၊ရုပ်ပုံများကနေကလပ်အသင်းနှင့်စားသောက်ဆိုင်ဒါပေမယ့်သင်မှတ်မိဖို့တစျခုအရေးကြီးသောအုပ်ချုပ်:အများစုကအဲဒီဓါတ်ပုံတွေကိုမကိုက်ညီတဲ့အဖြစ်မှန်၊အဘယ်သူမျှမဘယ်လောက်ပဲဝမ်းကခိုင်း။ အခုတော့ဖုန်းအတွက်များအတိုင်းမိန်းကလေးမျှလောက်များစွာသောအစီအစဉ်တွေကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြင်လှပပုံနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသူတို့အပျေါမှာ၊သင်ပိုကောင်းကိုမသိကြောင်း။ ကြိုးစားဖို့ဂရုတစိုက်လေ့လာမှု၏အရည်အသွေးဓာတ်ပုံရိုက်ကြည့်ပါဘယ်လောက်အရောင်တောက်တောက်သူမ၏မျက်နှာနှင့်အခြားအသေးငယ်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ အထွေထွေအတွက်၊အကွောငျးသတိရပါဒီပုံမြော်လင့်ခြင်းအဖြစ်မှန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖန်တီးချိန်းတွေ့အင်တာနက်ပေါ်မှာ။ ဒါကြောင့်၊စိတ်ပိုင်းအဘို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြင်ဆင်မည်ဟူသောအချက်ကိုသင်မြင်ရပါလိမ့်မည်အနည်းငယ်ကွဲပြားမိန်းကလေးမှာအစည်းအဝေးထက်အတွက်။ နှင့် မဆိုပါဘူးကြာငါကဘဲသတိပေးဤအကြောင်းကို။ ဆိုရင်ရှာ၏မေးခွန်းကိုဖြေတစ်ခုရရန်မည်သို့ကျွမ်းမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူအင်တာနက်ကနေတဆင့်သင်လှည့်လည်ရန်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်၊ထို့နောက်တစ်ဦး၏အမြင့်ဆုံးသက်သေပြချက်နည်းလမ်းများကိုအကိုမြှင့်သင့်ပရိုဖိုင်အတွက်ရှာ။ တိုင်းနီးပါးဆိုက်ရှိမည်ကိုတစ်ဝန်ဆောင်မှုသင်၏တစ်ခုဖြစ်သည်လူကြိုက်အများဆုံးယောက်ျားတွေ၊သင်မယ်ချက်ချင်းမြင်တွေ့မိန်းကလေးစာသားအတိုင်းပစ်သင်ပွင့်နှင့်မက်ဆေ့ခ်ျအသစ်ပဲတက်စောင့်ရှောက်ဖို့။ လည်း၊အကြောင်းမမေ့ပါနဲ့အခွင့်အလမ်းကိုပြသခံရဖို့အတွက်သတင်း။ ဒီၾကားထဲပင်ရန်ပရိသတ်တွေ။ ပြီးတော့၊သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်မှာရွေးချယ်အလွန်အကောင်းဆုံးသင်မလိုအပ်ကိုဝေမျှဖို့ဘာမှမနှင့်အတူအသီးအသီးသောသူမိန်းကလေးတစ်ဦးရေးသားခဲ့သည်။ ဖြုန်းဒါခေါ်သဘာဝရွေးချယ်ခြင်း။ အခုကဟန်သင်သည်ဤလှည့်ကွက်နှင့်အသေးအမွှားအရာ၊ဒါပေမယ့်တကယ်တော့ဒီအပ်အကျင့်ကိုကျင့်အလွန်အေးမြသည်။ ဒါဟာသင်ကူညီလိမ့်မည်အကြားထွက်မတ်တပ်ရပ်အလုံးကြီးမားသောလူအစုအဝေး၏ယောက်ျားတွေနှင့်အခွင့်အလမ်းကိုတိုးမြှင့်ကြောင်းအဆိုပါမိန်းကလေးရေးထားမည်။ ဒါကြောင့်တန်ဖိုးရှိစျေးပေါပေမယ့်ရလဒ်မည်မဟုတ်သင်စောင့်ရှောက်။ မိန်းကလေးအချစ်သောသူတို့တစ်နည်းနည်းနဲ့ ထွက်မတ်တပ်ရပ်၊အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်နိုင်ဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံးစိတ်စွဲမှတ်စေနေစဉ်၊အဆိုပါမိန်းကလေးမသိရပါဘူးသငျသညျမှာအားလုံး၊သင်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်အကြီးပုဂ္ဂိုလ်များ-အကောင့်နဲ့ဆွဲသူမ၏အာရုံစူးစိုက်မှု။ ပြီးတော့အားလုံးသင်ပေါ်တွင်မူတည်နှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်သင့်စွမ်းရည်ကိုအပေါ်။ သင်ရှိသည်လိမ့်မည်အများကြီးပိုပြီးလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်ရွေးချယ်စရာနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်များအကောင့်။ ဤသည်ပြီးခဲ့သည့်၊ဒါပေမယ့်အရေးအပါဆုံးအကြံဥာဏ်အခါအစည်းအဝေးမိန်းကလေးအင်တာနက်ပေါ်မှာ။ သူမ၏သိစေကြောင်းလိမ့်မည်သင်၌စိတ်ဝင်စား၊သင်ကွဲပြားခြားနားသောလူအစုအဝေး၏ငယ်ရွယ်သူတွေရေးမှသူမ၏အပေါ်လူမှုကွန်ယက်။ ဒါပေမယ့်မဖြုန်းပါနဲ့အချိန်အများကြီးအင်တာနက်ပေါ်မှာအများကြောင့်၊သင်အမှန်တကယ်လိုချင်တဲ့အရာတစ်ခုခုလုံးဝကွဲပြားခြားနားသည်၊သမ္မာ။ ဆက်သွယ်ရေးအတွက်အသက်ရှင်သောသတ္တဝါအများကြီးပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်သွေးဆောင်။ သုံးအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့တစ်ခုအဖြစ်ချိတ်သို့မဟုတ်အခြားလမ်း။ ထိုအခါကရှိနေပေလိမ့်မည်များအတွက်အသေးစားမဆုံးရှုံးရမှာပထမဦးဆုံးအစည်းအဝေးနှင့်ဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခု အဖြစ်အင်တာနက်ပေါ်မှာ။ ဒီဝေးအားဖြင့်အားလုံးမဟုတ်၊အရာကယ့်ကိုဖုံးကွယ်။ ဒါကြောင့်၊ကြိုတင်မဲအတွက်ထင်ကျော်၏ပုံရိပ်၊အကြောင်းအသင်ခံရလိမ့်မည် အကြောင်းပြောနေတာ၊အရပ်၏အစည်းအဝေးနှင့်နိုငျပုံကိုအံ့သြများနှင့်အောင်နိုင်အပေါ်။ သင်လည်သဘောပေါက်ရန်ရှိသည်သောအဓိကအရာကတကယ်တော့အင်တာနက်ကိုမှမခြားနားသည်။ ပိုပြီးဆွဲထုတ်နှင့်အတူအစည်းအဝေး၊အခွင့်အလမ်းကြောင်းတစ်စုံတစ်ဦးကအခြားသူအလိုတော်ပိုပြီးသတ္တိနှင့် ထက်သင်နှင့်သူမ၏နေ့စွဲ။ အများအပြားယောက်ျားတွေအလွန်ကြောက်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအစည်းအဝေးကြောင့်၊ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်လောက်ထိုင်ရန်အတွက်သင်၏အိမ်ဆန့်လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ဟန်ဆောင်အ ။ အဲဒီမှာသင်ရှိသည်လိမ့်မည်ဆောင်ရွက်ရန်သို့ကြည့်ရှုသူမ၏မျက်စိ၊ရှိမည်မဟုတ်များအတွက်အချိန်မိနစ်အပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်အစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြေ၊သို့မဟုတ်ရှာဖွေရန်အချက်အလက်။ တကယ်တော့၊အရာအားလုံးကိုအလွန်ရိုးရှင်းသော။ ယူသူမ၏ဖုန်းနံပါတ်၊ခေါ်ပြီးရက်ချိန်း။ အားလုံး။ လုပ်မနေပါနဲ့ကိုယ်မလိုအပ်တဲ့ပြဿနာများ။ မလိုပဲအ မပို့ပါဘူးသူမ၏မိုက်မဲသွင်။ ယူအရေအတွက်ကိုနှင့်။ အဓိကအလုံးစုံသောသင်ရနိုင်ကျွမ်းသောမိန်းကလေးများမှာတူညီသောအချိန်၌တစျနေ့။ သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်၊ထက်မြက်၏ပရော ကျွမ်းကျင်မှုအကဲဖြတ်သူမ၏အသွင်အပြင်နှင့်ဤထပ်ခါတလဲလဲနိုင်ပါသည်နေ့တိုင်းရှာတွေ့သည့်တိုင်အောင်သင်တို့ကိုတဦးတည်းသို့မဟုတ်အများအပြားမိန်းကလေးများဘယ်သူသင်အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားကြလိမ့်မည်။…
အပြန်ခုန်နှုန်းဖော်ပြ၏အချိုးအဝင်မက်ဆေ့ခ်ျများသို့ပြန်ကြားချက်။ အကယ္ပြန်ကြားချက်မှုနှုန်းနိမ့်သည်၊ဒါကြောင့်နည်းလမ်းများကြောင်းအသုံးပြုသူမရှိသလောက်ပြန်ကြားချက်။ ရဲ့လျှင်အမြင့်ဆုံး၊အသုံးပြုသူအများကြီးပိုဖွယ်ရှိသည်ပြန်ကြားချက်။ ဓါတ္ပံုမ်ားကိုခဲ့ကြကြောင်းမှတ်အဖြစ်ဂုဏ်ကိုသာအားဖြင့်ကြည့်ရှုကြသူအသုံးပြုသူများမှအမြင်ဆှအကြောင်းအရာ။ သင်အကြောင်းကိုပိုမိုဖတ်ရှုနိုင်ဒီကိုပြောင်းလဲသင့်ရဲ့ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုအပိုင်းမှာဆိုရင်အထိမ်းအမှတ်ဓာတ်ပုံအဖြစ်ဆှ၊ဒါဟာသာမြင်နိုင်ကြသူအသုံးပြုသူများမှသဘောတူကြည့်ရှုရန်နှိုးဆှအကြောင်းအရာ။ သင်အကြောင်းကိုပိုမိုဖတ်ရှုနိုင်ဒီကိုပြောင်းလဲသင့်ရဲ့ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုအပိုင်းမှာအကြံပြုသည်မဟုတ်သုံးစွဲဖို့သီးသန့်လှော်လှန်ခြင်းအတွက်မီးမြေခွေး၊ သာစကားမ်ား ၊၊စသည်တို့ကို။ (။ အသုံးပြုမှုအပိုင်းအသုံးပြုသူ၏သဘောတူညီချက်)
ငါကဲ့သို့သောလူမှုရေးဖြစ်စေ၊အနည်းငယ်အချိုရည်၊သို့မဟုတ်န့်ညက်နှင့်အတူ။ ငါခရီးသွားလာကြိုက်လားပေမယ့်လာကြပါကြောင်း။ ငါအတော်လေးတက်ကြွသော်လည်းအကျိုးဆောင်များကဲ့သို့ပြုပါရန်အိပ်ရာအာလူးနှင့်အတူကောင်းတစ်ဦးရုပ်ရှင်နှင့်ဖန်ခွက်။ နီးပါးအလွန်ကောင်းမွန်။ ဘယ်သူမှပြီးပြည့်စုံသော။ ငါပွင့်လင်းစိတ်နဲ့ငါအတွက်စိတ်ဝင်စားများစွာသောအမှုအရာ:ဂ်ပန္ႏပထမဦးဆုံး၊ဂီတ၊ရုပ်ရှင်၊စာအုပ်များ၊စားသောက်ဆိုင်များ၊ဥယျာဉ်များ၊ဟင်းချက်၊ခရီးသွားလာ။ ပင်ငါအလုပ်။ ငါ ပျော်စရာရှိခြင်း။ တာစပ်စုသောနည်းလာတာကိုတွေ့ရငါ့အရေးအသားမှာမြင်းမ-ခေတ်ရေစီးကြောင်း။ သော့ချက်စာလုံးများဖြစ်ကြောင်းကံညံ့၊ချိတ်ဆက်၊လဲလှယ်၊ချစ်ကြည်:ကျွန်တော်ကအလုပ်လုပ်ပျြောဒီအမြင်ကွင်းတစ်ခု၏အပြောင်းအ ။ ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဟုေကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးတဲ့သူကလူထားသူတို့ကိုယ်သူတို့ထက်။ ငါနင့်ကိုဖက်လိုက်ချင်တယ် ဆို:သင်ထွက်ရှာလျှင်သင်ဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိလာလိမျ့မညျ၊သငျသညျကျောပေးအပြောင်းအလဲကို။ ။ ။ ငါပျော်မွေ့ထွက်မသွားဘို့မုန့်ညက်၊မြင်းစီးခြင်း၊ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးခြင်း၊တေးဂီတ၊၊ဂရုစိုက်ငါ့အဘို့တိရိစ္ဆာန်များ၊အႏုပညာ၊စာဖတ်ခြင်းနှင့်သွားများအပန်းဖြေလမ်းလျှောက်ငါ့ခွေးကိုနှင့်အတူ။ ငါဖြစ်၏၊ဤအမည်ဖြင့်ဆောင်းပါးတစ်၊သစ္စာနှင့်ရိုးသားသော။ ပုံရသည်။ မင်္ဂလာပါ၊ငါ့အဂျိုးဇက်ပါၡမ်ားအမျိုးသမီးနားလည်မှု၊မေတ္တာ၊ဂရုစိုက်တတ်တဲ့၊ချစ်ခြင်း၊သစ္စာ၊ကိုယ့်အတွက်ယုံကြည်အောင်ငါ၏အဖော်မင်္ဂလာ။ ကောင်းစွာ၊အဘယ်သို့ပြောနိုင်? ကျွန်တော်ပြောတဲ့ကျွန်မဟာကြီးမားလှတယ်။ ငါအချိန်ကြာမြင့်စွာအဘို့အ-အခေါ်အဝေါ်ကြားဆက်ဆံရေးဒါပေမယ့်အကယ်၍ကျွန်တော်ရှာဖွေအခြားမိတ်ဆွေကောင်း၊ထို့နောက်လိမ့်မည်ကြောင်းတစ်ဆုကြေးငွေ။ ငါတီနှင့်မည်မဟုတ်ဘို့အနည်ထိုင်။ ငါမုန်းသောဤအစိတ်အပိုင်း။ ကောင်းပြီ၊တစ်ပျော်စရာ-မေတ္တာပါမိန်းကလေးတစ်ဦးသည်အ၊ကျနော်အချစ်အစားအစာ၊ ဂီတ၊ရုပ်ရှင်၊စာအုပ်များနှင့်ရံဖန်ရံခါအိပ်သွန် ၊ငါချစ်ဟောင်းကျောင်းမျိုး၏အချစ်ဇာတ်လမ်း၊သင်သိလား။ ငါအသစ်သောအရာသင်ယူ။ ရှာဖွေနေအတွက်တိရစာန်၊မိတ်ဆွေတစ်ဦး၊တစ်ဖက်၊တစ်ဦးသောသူသည်။ အားလုံးတဦးတည်းအတွက်နဲ့သာကျွန်တော့်အတွက်တွင်နေထိုင်ပါ၏၊ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင်အနှစ်အဘို့နှင့်အလုပ်လုပ်။ ဒါပေမယ့်မအင်္ဂ။ နှင့်မေးခွန်းများကိုအတူမင်္ဂလာပါ၊နေကောင်းလား၊ဇ။ ငါရှိသူတစ်ဦးကမိန်းကလေးတစ်ဦးကောင်းသောသဘောနူးညံ့ကြင်နာမှု၊မေတ္တာနှင့်ချစ်ခင်စုံမက်။ ငါရန်မလိုအပ်ပါဘူးသင့်ရဲ့အချည်းနှီးသောစကား၊အားလုံးတွေ့ဖို့လိုသေးတယ်တကယ်တော့)ရှိနေပါသေးတယ်နိုင်သူတစ်ဦးတွေ့ဆုံရန်နှင့်အတူငါ့အကြောင်းသက်သေပြဖို့သူဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာအပေါင်းတို့၏၊အသိစေသောငါ၏မိခင်ဘာသာစကားသည်ပြင်သစ်ဒီတော့ကျွန်မပန်လျှင်ငါ့မာဟန်သာမန်ပါ။ ကျွန်တော်ဟာသဘာဝ၊အလိုအလြော၊သွက်၊အထွက်နှင့်ခိုင်ခံ့သော။ ငါမေတ္တာအသက်တာနဲ့အသက်ရှင်တယ်။ ဧည့္ခန္းအတွက်ပြင်သစ်နှင့်မေတ္တာကြောင့်၊အစဉ်အမြဲငါပြန်မှသွားရန်ဖြစ်ပါတယ်အတိအကျမရှိ။ ငါပြောသည်ပါပြီကျွန်တော်မျိုးနဲ့ရယ်အများကြီးနှင့်ငါ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာဘဝ။ ဆုံးဃမြီး၊။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့နှင့်အမျိုးသမီး၊ဧည့္ခန္း။ ငါတူကြာမြင့်စွာလမ်းလျှောက်အတွက်သဘာဝအလှလမ်း ပဲရစ်၏။ ငါသည်အခုန်ကိုချစ်ကဲ့သို့အရူးအလယ်၌ငါ၏။ ငါ ။ ငါရိုသေလေးစားင့္အံ့။ အဆိုပါလုပ်ကွက်ခန့်၊ဒါပေမယ့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ယုံကြည်။ ငါသည်မိုဃ်းသက်မုန်တိုင်းထချက်ပြုတ်၊ချုပ်တရံကုလား၊အသိအပင်တစ်ပင်မှတစ်ပေါင်းပင်၊နှင့်မျှော်လင့်အဖြစ်စိတ်ဝင်စားဖို့ဆွဲဆောင်မှုနှင့်ဂရုစိုက်ဖော်ဖို့အဆင်သင့်ကြန္ပ်ဴတာမွညိွေပးသည္။ ငါဖြစ်၏တစ်ဦးအလွန်မင်္ဂလာရှိ၏။ ငါနှိမ့်ချငါ၏အအိပ်မက်များ၏နေထိုင်မှုအတွက်အခြားယဉ်ကျေးမှု၊ဒါပေမယ့်ငါ့ခင်ပွန်းသေဆုံးပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့အိမ်တအိမ်ဝယ်မှာမီဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လှုပ်ရှားနိုင်ဒီနေရာမှာအမြဲတမ်း။ ငါဒီမှာအသစ်တစ်ခုဖန်တီး။ ။ အကောင်းဆုံးအမှုအရာအတွက်လာသေး။ မေတ္တာပြည့်ဝသောပျော်ရွှင်စရာနှင့်တက်ကြွ။ ငါသည်ပျော်မွေ့ခြင်းဥယျာဉ်အပြင်ဘက်လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်စက်ဘီးစီး။ နံနက်တစ်ဝါသနာမွေးမြူရေးနှင့်ပျော်မွေ့၏အသီးအပွငါ့အလုပ်သမားအဖြစ်ပေးသွားဖို့ များအပြားဆိုဒ်များအဖြစ်အမည်ခံအခမဲ့ဒါပေမယ့်သင်ထိမှန်နှင့်အတူအံ့သြစွဲချက်သင်ပူးပေါင်းပြီးနောက်။ ဆက်သွယ်ထားသောတစ်ဦးတစ်အခမဲ့ပြင်သစ်ချိန်းတွေ့ဝန်ဆောင်မှု၊အပေါင်းတို့နှင့်အတူအင်္ဂါရပ်များအခမဲ့အဘယ်သူမျှမအံ့သြဖွယ်။ ဒီကိုဆိုလိုသည်သင်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်နှင့်လက်ခံရရှိသတင်းစကားများ၊ချက်တင်၊၊ဘလော့ဂ်ပို့စ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရိုင်းပေမယ့်ဖော်ရွေနိုင်ငံတကာနှင့် ပြင်သစ်ချိန်းတွေ့ဖိုရမ်များမပါဘဲမည်သည့်ကုန်ကျစဉ်။ အဘယ်သူမျှမခရက်ဒစ်ကဒ်လိုအပ်သည်။ အဘယ်သူမျှမ၊အဘယ်သူမျှမခရက်ဒစ်၊အမွတ္ကူပွန်၊အဘယ်သူမျှမနောက်နေ။ သစ်ဖြည့်ဆည်းပြင်သစ်တစ်ခုတည်းမိတ်ဆွေများက။ သင်တို့ကိုစုံစမ်းပြီအားလုံးအစဉ်အလာနည်းလမ်းတွေရှာတွေ့မှအထူးတစ်စုံတစ်ဦးကပြင်သစ်တွင်? သင်ငြီးငွေ့၏ပြင်သစ်ဘားကလပ်မြင်ကွင်းတစ်ခု၊လာမယ့်အိမ်မှတစ်ဦးအချည်းနှီးသောအိမ်၊အထီးကျန်ကျောက်ပြားကိုအဘို့အ တဦးတည်းမှာသူတို့အားရင်ခုန်စရာပြင်သစ်စားသောက်ဆိုင်များ၊ဆိုးရွားမျက်စိကန်းရက်စွဲများအားဖြင့်သင့်ရဲ့အောင်သွယ်သူငယ်ချင်းများ၊ပြင်သစ်ဒေသခံတစ်ဦးတစ်ယောက်အုပ်စု၊တစ်ဦးတစ်ယောက်အဖြစ်အပျက်များနှင့်အစည်းအဝေးနှင့်မျှမတို့ရလဒ်များကို
ယနေ့ပြင်သစ်နိုင်ငံသည်မိန်းကလေးများကိုျမင္လိုက္ရရောက်ရှိချိန်းတွေ့ဆိုက်အတွက်အစည်းအဝေးယောက်ျားတွေနှင့်အတူမုတ်ဆိတ်နှင့်အတူအပိုကထက်သိမ်းပိုက်။ ၏တန်ချိန်နှင့်အတူအသစ်အသုံးပြုသူများအပေါင်းတို့သည်အချိန်၊ရက်စွဲပြင်သစ်မိန်းကလေးကျိန်းသေသင်ကူညီကိုရွေးချယ်ခြင်းအတွက်တစ်ဖက်။ လူတိုင်းသိသောရှာဖွေပွဲစဉ်တွင်ပြင်သစ်နိုင်ငံနီးပါးမဖြစ်နိုင်ဘူး၊ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ဒီဇိုင်းကိုအသုံးအတွေးစိတ်ထဲမှာ:စေက်ပ္လွယ်ကူသည်၊ပျော်စရာ၊နှင့်လုံးဝအခမဲ့။ ယနေ့ပြင်သစ်မိန်းကလေးများကကမ်းလှမ်းအကောင်းဆုံးအင်္ဂါရပ်ကဲ့သို့လွယ်ကူသောရှာဖွေရေးအတူမိုဘိုင္း လက္ကုိင္ဖုန္းအပလီေကးရွင္းကလွယ်ကူအောင်ရှာဘို့ယောက်ျားတွေနှင့်အတူမုတ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုကနေစက္ကန့်အတွင်း၊ဒါကြောင့်သင်ကလက်လွတ်ဘယ်တော့မှအခွင့်အလမ်းရှာဖွေဖို့သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးသင့်လျော်သည်။ ယူကိုကြောက်၏ထွက်ချိန်းတွေ့ခွင့်ပြုသည့်ရက်စွဲပြင်သစ်မိန်းကလေးကိုသင့်အဘို့ထိုသို့ပြု။ ခါင္က။ စေဘယ်လိုသင်ပြပါချိန်းတွေ့ပြင်သစ်နိုင်ငံကမိန်းကလေးများထက်ခြားနားသည်အခြားချိန်းတွေ့ရဲ့တူဆိုဒ်များ ။ ကျနော်တို့ပေးပိုင်ခွင့်ကိရိယာကဲ့သို့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစမ်းသပ်မှုများလုပ်ပိုင်ခွင့် သင်တွေ့ကောင်း-လိုက်ဖက်ယောက်ျားတွေနှင့်အတူမုတ်။ ယနေ့ပြင်သစ်မိန်းကလေးစောင့်ရှောက်သင့်ပရိုဖိုင်းကိုအရောင်ပြန်၏၊ဒါကြောင့်သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ကောင်းစွာ-သင့်တော်ပါတယ်ယောက်ျားတွေနှင့်အတူမုတ်။ ဝင်ရောက်သည်ရိုးရှင်းပြီးသင်စတင်နိုင်ပါသည်၊အကောင့်တစ်ခုအတွက်သာတစ်စက္ကန့်အနည်းငယ်။ ကျနော်တို့တစ်ခုတည်းသောအထောက်အကူဖြစ်စေအချက်အလက်မှသို့မဟုတ်အခြားလူမှုကွန်ယက်ကို။ ဒါဟာသင့်ကိုအံ့သြစေခြင်းငှါထွက်ရှာတွေ့မှတစျ၏နက္ခတ်ဗေဒင်လက္ခဏာအများစုနှင့်အတူလိုက်ဖက်ရက္အအမင္တတ္ၾ။ အပေါ်ချိန်းတွေ့ပြင်သစ်နိုင်ငံမိန်းကလေးများနိုင်ရှာပေးသငျ့သ-အမျိုးသားများအတွက်အာရုံစူးစိုက်အပေါ်အခွင့်ယောက်ျားတွေနှင့်အတူမုတ်။
ဒီအတွက်လူမျိုး၏ကျယ်ပြန့်အများစုရွေးချယ်မည်အသက်ပန်မိတ်လမ်း၊သင်တန်း၏၊ဤနည်းအတူဝယ်ယူထီလက္မွတ္မ်ား၊ဝီတြက္ေတာ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအနိုင်ကောင်းတစ်ခုတျစှဲဖို့သည်။ သို့သော်၊ကျွန်တော်မချိန်းတွေ့တီများ၏၊ဒါပေမယ့်ယောက်ျားနှင့်အတူသူ၏မျက်စိကန်းရက်စွဲမယ်ဆိုရင်၊လူတစ်ဦးအကောင်းကံလုံလောက်၊သင်အပြန်အလှန်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများနှင့်အတူအသီးအသီးအခြားမရှိစေခြင်းငှါအဘယ်သူလူတစ်ဦးအစေမျး။ လျှင်သင်သူမ၏အပေါ်တစ်ဦးအရူးအမူးပာင္းလဲနှင့်မသိရပါဘူးအဘယျသို့တစ်ခုချင်းစီရဲ့အတွေးအခေါ်၊အဘယ်သူမျှမ ဆက်ဆံရေးလည်းလိုအပ်ပါတယ်မရှက်၊ ခၚမိတ်ဆွေများသင်တို့ကိုကူညီဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ရက်ချိန်း။ မိတ်ဆွေအစုအဝေးနေရာအရပ်ဘယ်မှာအများဆုံးကျရောက်ဖို့ချစ်သောကြောင့်၊သူတို့ရဲ့ရွယ်တူ၊နှင့်ကိုင်စိတ်ကူးနီးပါးအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်၊နှင့်အများဆုံးဖြစ်ကြောင်းတည်း(မတစ်ခုတည်းမှအိမ်ပြန်ဖို့အတူလိုက်ပါသူ၏ဇနီးနှင့်သားသမီး)၊ဒါကြောင့်၊ဤအရပ်ဌာန၌၊သင်ဖို့ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသောကြောင့်၊အရှက်၊ဝံ့ဘဲထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့၊ဘာမှရှက်စရာပင်လျှင်ပယ်ချခဲ့ပါသည်။ အထူးသဖြင့်ကလေးကိုခေါ်သွားသင့်ရှေ့ကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့၊ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းမိန်းကလေးရန်အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေညိ။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့၊ဒါကြောင့်အခြေခံလိုအပ်ချက်အဘို့အယောက်ျားတွေအဖို့အတက်ကြွဖြစ်၊သင်စရာမလိုပါလျှင်အစွမ်းသတ္တိထိုသို့ပြုမှ၊သင်တို့မယုံသောမိန်းကလေးများကချစ်လိမ့်မည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပေါ်အလေ့ကျင့်ရေးစနစ်သည်အများဆုံးဖွယ်ရှိရှာဖွေရန်မိမိတို့အရာဝတ္ထု၊သို့ဖြစ်လျှင်ဤသည်အတူတူအလုပ်လုပ်စနစ်၊အလုပ်ငါအလုပ်ကဲ့သို့အလားတူစီးပွားရေး၊ရှာတွေ့ရန်လွယ်ကူအသုံးဘာသာစကားနှင့်ဘာသာရပ်သည်သဘာဝအဖို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေလေ့လာသင်ယူနှင့်ကူညီရန်သီးအသီးအခြားအတွက်လေ့ကျင့်ရေး။ သုံးမှနှစ်ခုလုံးအတော်လေးအခမဲ့ အတွင်းလေ့ကျင့်ရေး၊စိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလိုအပ်ပါကြောင်းဖြစ်ပါသည်၊သူတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သို့မဟုတ်မိသားစုအသိ၊စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ရှက်ခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုအတော်လေးသေးငယ်သည်၊စိတ်လှုပ်ရှားသည်ပိုမိုပွင့်လင်း။ အဓိကအကြောင်းအရာနှစ်ခုအပည္သူမ်ား၏ခံစားချက်ပထမဦးဆုံးမျက်မှောက်မှာချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်မီည။ အရေးကြီးတဲ့အချက်ပါ။ အခုအမကြီးတွေ၊စက်ဝိုင်းလူငယ်များ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုနေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများအဖြစ်လမ်းကြောင်းအပေါ်အခြေခံအားဖြင့်အပြန်ဖို့နေအိမ်မှအလုပ်အိမ်ကနေလျော့နည်းလူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများနားလည်သဘောပေါက်ရန်သဘောသဘာဝနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်၏အဆွေခင်ပွန်းသည်လျော့နည်း၊နှင့်အများဆုံးဖွယ်ရှိသိဆန့်ကျင်ဘက်လိင်မိတ်ဆွေသည်အလုပ်ခွင်တွင်၊ဒါကြောင့်အထက်ဝက်နီးပါးအလမ်းကလူတွေ့ဆုံရန်သူတို့ရဲ့တစ်သက်တာဖော်။ တူယူနစ်ကြောင့်ပိုပြီးနှင့်အတူဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်အရုံး၏အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၊ပင်အတော်လေးအကျွမ်းတဝင်မဟုတ်၊ရန်လွယ်ကူရှိသည်ကိုချစ်၊ဒါပေမယ့်ကွဲပြားခြားနားသောဌာနသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းယူနစ်အဖြစ်အလုပ်၏တစ်ခုတည်းအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ်နီးနီးကပ်ကပ်ဆက်စပ်နှစ်ဦးစလုံးအကျွမ်းတဝင်နှင့်ကျွမ်းတဝင်မရှိသော၊အကွာအဝေးထုတ်လုပ်ရန်အလွ၊လေ့ရှိပါတယ်။ လူတွေအများကြီးခံစားရသောအခွင့်အလမ်းများ အစည်းအဝေးသူတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အပေါ်ခရီးသည်နိမ့်လွန်း၊ထက်လျော့နည်းအတွက်၊တစ်ည။ ကျွန်တော်တို့ကိုအများအပြားအတွက်ခရီးသွားများအာရုံစိုက်မအလူ၊ပတ်ပတ်လည်၏စဉ်းစားဖြည့်ဆည်းစကားတညဉ့်အဘို့၊လူအနည်းငယ်ကအတွေး၏ဤအမျိုးကိုအခွင့်အဖြစ်နိုင်အချစ်ဇာတ်လမ်း။ တကယ်တော့အတွက်၊ခရီးကျနော်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည်နှင့်လှပသောရှုခင်းမှာတူညီသောအချိန်လည်းအများကြီးသိကြ၏လူ၊သင်ထင်လျှင်အပြုသဘောအလုံအလောက်၊ခရီးသွားလာမဟုတ်သကဲ့သို့ဒယ်အိုးတဲ့နည်းလမ်းသိမှရရန်အသီးအသီးအခြား။ ဟုတ်ပါတယ်၊အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးလျှင်သာထင်နေကြောင်း၊လူတစ်ဦးသည်အခြေခံအားဖြင့်မဟုတ်တစ်ဦးရွေးချယ်မှု။ ယခုဘဝသမ်အရမ်းမြန်ရနိုင်ရန်အတွက်ပိုကောင်းတဲ့အသက်တာကိုထိန်းဖြစ်ကန်းများအတွက်လုပ်ငန်းရုန်းကန်၊ရလဒ်တစ်ခုအဖြစ်၊အောင်မြင်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကြပြီလွဲချော်အကောင်းဆုံးမိတ်အသက်အရွယ်၊ဦးဆောင်အများအပြားလူမှုဆီနေဆဲတစ်ခုတည်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်အရသာရှိသည်တစ်ခုတည်းအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏သေးငယ်တဲ့လှူဒါန်းခြင်းဘဝအသက်တာ၊သူတို့မကြာခဏပြောဖို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဘားသို့မဟုတ်ဖေးသတ်ပစ်ရန်သို့မဟုတ်သေဆုံးချိန်အ၊ဒါကြောင့်သင်ဆဲအဘို့အရှာဖွေနေပိုင်ကိုယ်ပိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်၊အဖြစ်ကောင်းစွာသွားရန်ဤအရပ်သို့ ကြည့်ရှု၊ဖြစ်ကောင်း၊အမှန်တကယ်ပိုင်ဆိုင်ဖို့အသင့်ယောက်ျားသည်အထီးကျန်အရပ်၌ထိုင်သင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းဖို့ပေါ်လာ။ ထိုကဲ့သို့သောနေရာအများကြီးချောကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့လှပတဲ့မိန်းကလေး၊ဒါပေမယ့်လည်းပိုပြီးအမှီအလိုက်အရည်အသွေးများ၏ဘဝများမှာလည်းတွေ့ဆုံရန်လူငယ်လူ့အသက်လမ်းဖြစ်၏၊ဒါကြောင့်အရေးပါသည်ဤအခါသမယတွင်၊နှစ်ဦးစလုံးအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများရိုးသားပါ၊အသီးအသီးအခြားကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်အသီးအသီးအခြား၏ခန္ဓာကိုယ်ကကိုက်ညီဖို့အသင့်လိုအပ်ချက်ပြီးနောက်၊မိန်းကလေးများမိတ်ကပ်မပါဘဲအသွင်အပြင်နှင့်ကိုက်ညီမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အိပ်မက်၊စင်ကြယ်သောနှင့်လတ်ဆတ်သောအခမဲ့ ။ နှင့်မိမိကိုယ်ါချကျား၊ပိုပြီးကျရောက်ရန်၏ခံစားချက်ပထမဦးဆုံးမျက်မှောက်မှာချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ရှိသည်ဖို့ပိုများပါတယ်အကျဉ်းကွုံတှေ့ရအံ့၊ထို့ကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောနေရာတစ်နေရာရှာတွေ့ဖို့အရာဝတ္ထုပိုပြီးအလွယ်တကူသို့အခန်းကဏ္ဍ၊အောင်မြင်မှုနှုန်းမြင့်မားဖြစ်လိမ့်မည်။ အာမခံချက်မရှိပါင်လိမ့်မယ်လက်ခံခြင်းအားဖြင့်အသွယ်၊ဒါကြောင့်အလုပ်မျက်နှာသို့ဘဲအခြားအရာအားပထမနေရာ၌သင်၏အောင်မြင်မှုကိုနှုန်းကိုမသွားခင်ဒီလမ်းကြောင်း။
ဘယ္လိုရီပြင်သစ်တိုက်ရိုက်ညွှန်ကြားပြီးစမ်းချောင်းနှင့်အတူရုပ်သံလိုင်းရုပ်သံတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ? စောင့်ကြည့်ဖို့အားလုံးကိုပြင်သစ်တိုက်ရိုက်အစီအစဉ်များအွန်လိုင်းတွင်ကွန်ပျူတာ၊ ကို၊အိုင်ပက်ဒ်၊အန္းနှင့်တက်ဘလက်။ ဂိမ်းခလုတ်ကိုအထက်မှအစတီဗီကြည့်အွန်လိုင်းအခမဲ့။ အားလုံးကိုစောင့်ကြည့်ဗီဒီယိုများပြင်သစ်တိုက်ရိုက်အတွက်နယ်များအတွက်အခမဲ့။ ပြင်သစ်နိုင်ငံ။ ရုပ်သံပြင်သစ်-နယ်-ဗီဒီယိုကိုအွန်လိုင်းရုပ်သံ:ပြင်သစ်ပြင်သစ်တိုက်ရိုက်အသက်ရှင်သည်အရုပ်သံလိုင်းကထုတ်လွှင့်အွန်လိုင်း၊ဒါဟာ၏အစိတ်အပိုင်းကိုပြင်သစ်နိုင်ငံရုပ်သံ၊တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနှင့်အွန်လိုင်းအင်တာနက်ပေါ်မှာ။ အခမဲ့ရုပ်သံလွှင့်:ရုပ်သံလိုင်းရုပ်သံတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှကမ်းလှမ်းအားအခမဲ့အွန်လိုင်းရုပ်သံချန်နယ်နှင့်ဝဘ်တီဖြစ်သည်။ ဒီလို ဝန္ေဆာင္မႈအဗီြႏွင့္ဗီြ၊အဘယ်သူမျှမနေပါစေသင်သည်အဘယ်မှာရှိ။ ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရုပ်သံချန်နယ်အပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်ချန်နယ်တိုက်ရိုက်ရုပ်သံနှင့်အတူန့်အသတ်လက်လှမ်းမီ။ တီဗွီအသံလွှင့်အခမဲ့အွန်လိုင်းနှင့်တိုက်ရိုက်အင်တာနက်ပေါ်မှာ။ သငျသညျရိုးရိုးကိုရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ရုပ်သံလိုင်းကိုအတွက်ရရှိနိုင်နိုင်ငံ၏ရွေးချယ်မှု၏၊စတင်ထုတ်လွှင့်တိုက်ရိုက်ရုပ်သံလိုင်း။ အသီးအသီးနိုင်ငံအရေအတွက်ချန်နယ်၏ရပ်တန့်မည်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်သင်အမြဲအဖြစ်ကမ်းလှမ်း။ သင်ခံစားကြည့်တိုက်ရိုက်ရုပ်သံအင်တာနက်ပေါ်မှာသို့မဟုတ်စောင့်ကြည့်မှာအွန်လိုင်းအဖြစ်အပျက်၊တစ်တွဲ၊ရုပ်ရှင်၊အားကစား၊မှတ်တမ်းသို့မဟုတ်ကာတွန်း။ အရာအားလုံးအခမဲ့နှင့်န့်အသတ်။ စောင့်ကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ရိုက်ရုပ်သံကြန္ယက္မ်ား၊သင်လိုအပ်သမျှအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူပျမ်းမျှအရှိန်၊သို့မဟုတ်ပိုကောင်း၊အစာရှောင်ကွန်များအတွက်ပိုကောင်းအွန်လိုင်းရုပ်သံထုတ်လွှင့်။ တီဗွီကြည့်ခြင်းအပေါ်လည်းသင့်တော်ဖုန်းအတွက်၊ရုပ်သံချန်နယ်အပေါ်အလုပ်လုပ်မိုဘိုင်းဖုန်းများကဲ့သို့ပန်းသီးနှင့်အန္း၊သို့မဟုတ်ဖုန်းဒါပေမယ့်လည်းတက်ဘလက်။ ဖို့အခမဲ့ခံစားရထပ္မံျဖည့္စြက္သည္င္မည္ျဖစ္သည္။ အသက်ရှင်သောရုပ်သံချန်နယ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ်အများဆုံးတူဂူ ဒါမှမဟုတ်မြေခွေးနှင့်အခြားသူများ။ ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုဆကျသှယျဖို့တွန့်ဆုတ်ပူဇော်ပြီးတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မဟုတ်ကြောင်းသေးပေါ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှရုပ်သံ၊သို့မဟုတ်အခမဲ့အွန်လိုင်းရုပ်သံလိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ အကွတ်မှာဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကို’ခွင့်ပြုကွတ်’ကိုအပဳႏိုင္ရန္အတွေ့အကြုံဖြစ်နိုင်။ ဆက်လက်လျှင်သင်ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ပြောင်းလဲနေတဲ့မပါဘဲသင့်ရဲ့ကွတ်ချိန်ညှိသို့မဟုတ်သင်နှိပ်’လက္ခံ’ထို့နောက်အောက်တွင်သင်ဖို့သဘောတူကြပါတယ်။
အဖြေ:ရုံကဲ့သို့ပြတင်းပေါက်များ(ကွန်ပျူတာ)စနစ်များကိုအသုံးပြု။ ကြေးည့္သြင္းရန္ဆော့ဖ်ဝဲကို၊အန္းအတူတူမ။ တစ်ခု ဖိုင်သည်ဖိုင် အမ်ဳိးအတွက်အသုံးပြုတပ်ဆင်ပေါ်မှာဆော့ဗ်ဝဲကိုလည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ်။ တစ်ဦး:ဟုတ်ကဲ့လုံးဝ။ အဆိုပါကစားဆိုင်တပ်ဆင် ကကိုဒေါင်းလုပ်မှ၏ဆာဗာ၊ မှဆိုဒ်တစ်ခုကဲ့သို့စကားပြောပြင်သစ်နိုင်ငံမှတဆင့်ဝင်အလွန်အလားတူလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှလွဲ။၊သင်တဦးတည်းဖျော်ဖြေကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခ။ အဖြစ်မကြာကစားဆိုင်တွေ့၏ဗားရှင်းတစ်ခုအက္ပ္ကိုအသစ်များထက်တင့် လိမ့်မည်၊ဒါကြောင့်စတင်အထပ္မံျဖည့္စြက္သည္။ တစ်ဦး:အခါတိုင်းတစ်စုံတစ်ဦးကဒါင္းထားတဲ့ ဖိုင်ကနေပြင်သစ်စကားပြော၊ငါတို့သည်စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်သက်ဆိုင်တဲ့ ဖိုင်ကိုအပေါ်အားကစားနှင့်အခွင့်အသံုးျပဳသူမ်ားကိုဒေါင်းလုပ်တိုက်ရိုက်(သင်တန်း၏၊ငါတို့ခါႏွအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏)။ ပါကထိုဖိုင်မတည်ရှိပါဘူးအပေါ်အားကစား၊ကျွန်တော်ရှာအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှော။ တစ်ဦး:ပ်များနှင့်လိုအပ်သုံးစွဲဖို့အချို့သောစနစ်များအတွင်းစက်ကိရိယာ။ အခါသင်တပ်ဆင်အသုံးချသင်ကြားအားလုံး၏ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်ပြေးသောအပလီကေးရှင်း။ ခွင:အန္း၊အကစား၊အကစားလိုဂိုအမှတ်တံဆိပ်များ၏ဂူ ။ ဒီ ဝက်ဘ်ဆိုက်အခမဲ့အက္ပ္မ်ား၊အခွေအကြောင်းအရာ(အာင္လုပ္နည္း)၊ဤပုံစံကိုအသုံး
အဲဒါေၾကာင့္သူကအဆီရည်းစားဘယ်သူမမူမွီခဲ့စဉ်နှင့်ဤမိန်းကလေးအထင်သင်အလိုကြီးသောအမထိုက်မတန်ဖြစ်လိမ့်မည်။ မူတည်။ အချို့ကိစ္စများတွင်၊တစ်ဦးလျှင်မလေးကိုယ့်ယောက်ျားတစ်ယောက်နှင့်တွေ့ဆုံ၊သူမမးအဘို့မိမိအရေအတွက်လျှင်သူမကသင်တို့အထဲသို့ဖြစ်ပါတယ်။ သူမမေး၏ရှေ့တွင်အခြားသူများ၊ထို့နောက်သူမ ။ လိုသည်ကိုသင်သိမှရကောင်း၏၊ဒါပေမယ့်နေဆဲအကြိုက်၊ဒါပေမယ့်သူမပြု၊ထို့နောက်သူမတကယ်လိုသင်သိမှရ။ သူမသိမှရရန်သင်ပိုကောင်း။ ဖြစ်နိုင်ပါသည်အဖြစ်မိတ်ဆွေတစ်ဦးသို့မဟုတ်အဖြစ်အလားအလာအချစ်၊ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာအချိန်ပြောပြလိမ့်မယ်။ ပစ္စုပ္ပန်အဘို့အ၊သူ့လိုသိမှရရန်သင်ပိုကောင်း။ ပဲသေချာသူမကမပါတီသို့အသက်အာမခံသို့မဟုတ်အပေါက်တစ်ပေါက်ကိုတံခါး ။ မလျှင်၊သူသည်ထင် သင်တန်ဖိုးရှိအခွင့်အလမ်းနှင့်အပူ။ ဒီနေ့ခေတ်၊လူတိုင်းလိုလားစကားပြောစာသားကနေတဆင့်ဆဲလ်ဖုန်း၊ဒါကြောင့်ရိုးရိုးမိန်းကလေးဖြစ်ချင်သောမိတ်ဆွေတစ်ဦး(သို့မဟုတ်ရှိသည်ကဲ့သို့သင်တို့အရင်းအမြစ်များအတွက်အိမ်စာ)။ သို့မဟုတ်ဖြစ်ကောင်းဒါဟာပွင့်မှတစ်ဦးဆက်ဆံရေး။ ထိခိုက်မှုမရောက်သေး၊အကြမ်းဖက်မှုသို့မဟုတ်ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊နှောင့်ယှက်သို့မဟုတ်ကိုယ်ရေးအချက်ကျူးကျော်၊ဖို့ဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ်ရှေ့၊လိမ်လည်မှုသို့မဟုတ် ၊ထိခိုက်မှုမရောက်သေး၊အကြမ်းဖက်မှုသို့မဟုတ်ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊နှောင့်ယှက်သို့မဟုတ်ကိုယ်ရေးအချက်ကျူးကျော်၊ဖို့ဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ်ရှေ့၊လိမ်လည်မှုသို့မဟုတ် ၊ထိခိုက်မှုမရောက်သေး၊အကြမ်းဖက်မှုသို့မဟုတ်ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊နှောင့်ယှက်သို့မဟုတ်ကိုယ်ရေးအချက်ကျူးကျော်၊ဖို့ဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ်ရှေ့၊လိမ်လည်မှုသို့မဟုတ် ။ ကပုံမှန်သို့မဟုတ်သူအသာလိင်ရှာဖွေနေ။
တူညီသောလမ်းလူလူတွေ့ဆုံရန်အတွက်မည်သည့်တိုင်းပြည်။ အတူတူအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့်၊သွားသဖြင့်ကျောင်းကိုအတူတကွအားဖြင့်၊ထွက်ဆွဲထားအတွက်အရက်ဆိုင်၊ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်အပေါ်တူညီသောဘတ်စ်ကားအားဖြင့်လာမည့်တံခါးအသီးအသီးအခြားအားဖြင့်လာရောက်ပူးပေါင်းအတူအားကစားရုံ၊အားကစားကလပ်၊အင်တာနက်ကိုကျော်အတွက်၊အတန်း၏စတိုးဆိုင်၊ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်စတင်မိတ်ဆက်ဖို့အသီးအသီးအခြားအလှန်အားဖြင့်မိတ်ဆွေများ၊စတာတွေ။ စသည်တို့ကို။ ကောင်းပြီဆိုရင်ကျော်လိင်တူအရက်ဆိုင်များအလုပ်ကြီး။ သင်တို့သည်မဖြစ်ကြလျှင်၊ထို့နောက်သင်ရုံရှိသည်ဖြစ်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်လူသင်မှလာကြလိမ့်မည်၊သင်မူကားလည်းမေးရန်ရှိသည်လူတို့ကဲ့သို့သင်တို့သေချာမတယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့လိင်စိတ်။ သင်သည်လည်းကြည့်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့သို့ပေမယ့်သင်တို့ကိုယူဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် ကြိုတင်တွေ့ဆုံသည့်အခါအခြားယောက်ျားတွေ။ ဘုံကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားတွင်အပြော’အုပ္'(အဓိပ္ပာယ်’ကောင်းသောနေ့’)သို့မဟုတ်(ကောင်းသောညနေခင်း)။ အနှုတ်’အနှုတ်’အသုံးပြုစေခြင်းငှါအကြားမိတ်ဆွေတွေခြင်း(အများအားဖြင့်အကြားက်ာ္လြန္ရအသီးအသီး၏လူလှုပ်လက်အခြားသူများနှင့်အတူ။ သငျသညျဆိုပါကပြားကြောင်း၊ရေတွက်ခြင်းအသီးအသီးဆွဲနှုတ်နှစ်ဆ။ ထို့ကြောင့်၊အဆိုပါတွက်ချက်မှုသည်။ အဘယ်သူမျှမ၊အိပ်မက်အကြောင်းလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်၏ဦးနှောက်ထဲမှာအိပ်ပျော်နေတဲ့တိရစ္ဆာန်။ အဘယ်သူမျှမ၊အဘယ်သူမျှမမှော်ဒါသောဆက်သွယ်မှုများအကြားအိပ်ပျော်သို့မဟုတ်အိပ်မက်။ စဉ်းစားကြည့်ပါကပိုမိုလွယ်ကူသည်၏ဖြစ်နိုင်ခြေကို’ဖတ္’အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ရဲ့အကြံအစည်နေစဉ်နိုးကြားထက်အိပ်နေစဉ်အတွင်း။ ကတည်းကသုတေသနသို့စိတ်ကိုစာဖတ်ခြင်းသက်သေပြခဲ့သည်ထိုကဲ့သို့သောစွမ်းမဖြစ်နိုင်၊အကြောင်း’အိပ်မက်လမ်းလျှောက်’သို့မဟုတ်အစည်းအဝေးအတွက်အခြားသူများအိပ်မက်ဖွယ်ရှိဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြတယ္တဲ့။ တူညီသောလမ်းလူပါဘူး။ လက်ထရောနစ်၊သို့မဟုတ်အမိန့်။ ဆက်သွယ်ရေးလို့လည်းဆိုလိုနိုင်ပါသည်ခရီး၊ဒါကြောင့်အားဖြင့်ကားလမ်း၊ရထားလမ်း၊လေထုနှင့်ရေဟုတ်ကဲ့၊ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျဆိုပါကအများကြီးအတွက်ဘုံသို့မဟုတ်တလျှောက်လွန် ဖြစ်ကောင်းအရေးမပါဘူးဆိုရင်သင်တွေ့ဆုံမီသင်ကဲ့သို့ကြာမြင့်စွာသင်ရှိသည်စကားပြောဖို့သူတို့အချို့လမ်းအတွက်။ ဦး။ ဒီေ။ ဇဂရမ်တီတွင်။ အတွက်မြင့်တက်လာ။ ့ဇအက၊ဦး။ မီတာ့နဲဂရမ်။ ဒါကြောင့်၊။ တီဂရမ်တီတွင်။ ထည့်သွင်း။ တီ။ ဒါတီ။ ။ ယခုသင်၏တန်ဖိုးကိုရှာအဇ။
ကျနော်တို့အခမဲ့ဖြစ်ကြသည်ကိုအင်္ဂချိန်းတွေ့ဆိုက်အတွက်။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်တစ်ခုတည်းနှင့်ရှာအွန်လိုင်းချစ်ပြင်သစ်နိုင်ငံအတွက်၊အရေးယူဖို့ကြိုးစား။ များစွာသောတစ်ဦးတစ်ပြင်သစ်တွင်စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳနယ္သာ။ တွေ့ဆုံပြင်သစ်တစ်ဦးတစ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့အင်္ဂချိန်းတွေ့ဆိုက်။ တွေ့ပြီးစကားပြောနှင့်အတူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ပြင်သစ် ။ တွေ့ဆုံပြင်သစ်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာများအတွက်အခမဲ့နေ့။ ပျော်စရာရှိသည်။ ကျနော်တို့အခမဲ့ဖြစ်ကြသည်ကိုအင်္ဂချိန်းတွေ့ဆိုက်အတွက်။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်တစ်ခုတည်းနှင့်ရှာအွန်လိုင်းချစ်ပြင်သစ်နိုင်ငံအတွက်၊အရေးယူဖို့ကြိုးစား။ များစွာသောတစ်ဦးတစ်ပြင်သစ်တွင်စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳနယ္သာ။ တွေ့ဆုံပြင်သစ်တစ်ဦးတစ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့အင်္ဂချိန်းတွေ့ဆိုက်။ တွေ့ပြီးစကားပြောနှင့်အတူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းပြင်သစ်ချိန်းတွေ့ဆိုက်။ တွေ့ဆုံပြင်သစ်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာများအတွက်အခမဲ့နေ့။ ပျော်စရာရှိသည်။ ဟယ်လိုပါဒို ။ ငါအေးနှင့်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးလွယ်ကူမယ့်။ ငါသမီးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ငါသူမ၏ကိုချစ်။ သူမကငါ့မာန။ ကျွန်တော်ယုံကြည်သည်စစ်မှန်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊အသံခ်။ နှင့်။ ကြည်သည်ဟုတ်မှန်သောသဘောအသက်တာ၏။ ရှာဖွေနေကောင်းနဲ့ကောင်းတဲ့လူဆိုလူလိုတူရှာဖွေနေကောင်းနဲ့ကောင်းတဲ့လူဆိုလူလိုတူရှာဖွေနေကောင်းနဲ့ကောင်းတဲ့လူဆိုလူလိုတူရှာဖွေနေကောင်းနဲ့ကောင်းတဲ့လူဆိုလူလိုနှင့်အတူကောင်းသောရှာဖွေနေနှင့်တစ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအကြောင်းဟိုင်းကျွန်တော့်နာမည်က ။ ငါမွေးဖွားခဲ့တယ်၊ ယခုလက်ရှိတွင်ပဲရစ်။ ငါအစီအစဉ်ကိုရွှေ့ဖို့နယ်သာလန်အတွက်အနီးအနာဂတ်။ ငါကဲ့သို့သောတစ်စုံတစ်ယောက်ကချိန်းတွေ့ဖို့ကိုအတူအလားတူအကျိုးစီးပွား။ ငါပျော်မွေ့ဂီတ၊စောင့်ရှောက်ခြင်း၊စာဖတ်ခြင်း၊ခရီးသွား၊နှင့်အရေးယူရုပ်ရှင်။ ငါလက်ရှိတွင်အလုပ်အဂၤလိပ္စာဆရာ။ မင်္ဂလာပါ၊ငါအမျိုးနှင့်လူအဘို့ရှာဖွေနေအမျိုးနှင့် ။ ငါအသက်ရှင်သောအတွက်ပြင်သစ်နှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာခရီးသွားလာ။ အဖြစ်အမည္ကန့်သတ်။ အကောင်းဆုံးအရေးအပေါ်အဋ။ ဖြစ်နိုင်ခြေအပါအပူနွေးနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနှင့်မေတ္တာအမျိုးသမီးများဆွဲဆောင်မှုနဲ့ကျွန်မအများကြီးရှိသည်။ ငါကဲ့သို့ရွေ့လျားနှင့်ခရီးသွားလာဘို့အရှာနေပါ၏နူးညံ့သိမ်မွေ့နှင့်လူငါ့၏အသက်အရွယ်ပြင်သစ်ချိန်းတွေ့:အင်္ဂချိန်းတွေ့လုံးဝအခမဲ့ချိန်းတွေ့ဝက်ဘ်ဆိုက်။ ဒီဖိုင်ချိန်းတွေ့ဆိုက်ချိန်းတွေ့ဖို့တစ်ခုတည်းအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအတွက်။ အများအပြားပြင်သစ်တစ်ဦးတစ်စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်ကိုတွေ့အွန်လိုင်း။ ချိန်းတွေ့အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအတွက်ပြင်သစ်မှာကျွန်ုပ်တို့ချိန်းတွေ့ဝန်ဆောင်မှုကိုလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုပူးပေါင်းတဦးတည်းအကြားဝက်ဘ်ဆိုက်၏အခြားအ ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များသင်၏စုံလင်သောမေတ္တာပွဲ။ ရေးယူဖို့များအတွက်မှတ်ပုံတင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြော်ငြာနှင့်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့စတင် အတူတဦးခ်င္းပြင်သစ်နိုင်ငံအတွက်။
ကျွန်တော်ထင်ကြောင်းဥရောပအမျိုးသမီးအလွန်အဆင်းလှသောနဲ့မိသားစုအတြက္ဦး။ ဒါကြောင့်ဘယ်လိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ဥရောပအမျိုးသမီး။ ငါဘယ်လိုလက်ထပ်မိန်းကလေးတစ်ဦးကိုဥရောပကနေ? ပထမတော့သင်ကရှိသည်ဖို့သူမ၏တွေ့ဆုံရန်အကြောင်း၊ကဒါလွယ်ကူသည်။ အမျိုးသမီးထံမှအမျိုးမျိုးသော၏ဥရောပနေရာသူတို့ရဲ့အချက်အလက်အတွက်အင်တာနက်၊ဥပမာအားဖြင့်၊ပေါ်မှာအိပ်မက်။ သွားဖို့အခန္းမီးတွေ၊အရေးပါအခမဲ့အီးမေးလ်အများအပြားမိန်းကလေးများသို့မဟုတ်ကိုသူတို့ကိုဖိတ်ခေါ်ဗီဒီယိုစကားပြောသင်မှန်ကြိုက်လိမ့်မယ်ဒီနည်းလမ်းအများ၏ဆက်သွယ်ရေး။ ယူ၏အခွင့်နှင့်အင်တာနက်ချိန်းတွေ့ပေါ်မှာ အိပ်မက်၊ထိုအခါဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သင်မျှဝေကြလိမ့်မည်၊သင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံနှင့်အတူအခြားသူအမျိုးသားများမည်သို့သိရပါဘူးရှာဖို့ဥရောပသမိန်းကလေးများ။ စိတ်ကူးရှာဖွေနေ၏ဒုတိယတစ်ဝက်ပြည်ပလူသိများခဲ့ပြီးရာစုနှစ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊အဘယ်သူမျှမအင်တာနက်၊ဒါပေမယ့်လူင်းတို့ ၊သို့မဟုတ်အထီးကျန်နှလုံးကြော်ငြာများကို၊သတင်းစာတွေမှာ။ တခါတရံယောက်ျားနှင့်အမျိုးသမီးပါဝင်ခဲ့သည်နိုင်ငံသားများ၏တစ်နိုင်ငံ၊တခါတရံမှာအမျိုးသမီးရွှေ့ပြောင်းရန်အခြားတိုင်းပြည်မှသူမ၏ယောက်ျား။ ယခုအခါကမ္ဘာ့အကျယ်ပြန့်ဝက်ဘ်ဒါလူကြိုက်များဖြစ်လာခဲ့သည်တကယ်ရှာတွေ့ရန်လွယ်ကူသင့်ရဲ့ရည်းစားပြည်ပ။ နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်၊နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြစ်နိုင်ခြေများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အဖြစ်ကောင်းစွာ။ သင်မည်သို့ရှာတွေ့မေးလ်အမိန့်သတို့သမီးကနေရုရှား။ ကိုယ့်အမျိုးအစားအတွက်အသင့်ရဲ့ဆိုဒ္လိပ္စာဘားအိပ်မက်။ အိပ်မက်သည်၏တစ်ခုဖြစ်သည်လူကြိုက်အချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှုအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးနိုင်သင်သည်အဆင်းလှသောနှင့်ဂရုစိုက်မိန်းကလေးများထံမှရုရှားနှင့်ယူကရိန်းနှင့်ရှင်းပြဘယ်လောက်တစ်ဦးမေးလ်အမိန့်သတို့သမီးကနေရုရှားနိုင်ငံသည်။ တွေ့ဆုံရန်ကျွန်ုပ်တို့၏မိန်းကလေးများကြောင်းမြင်ရပါလိမ့်မည်သူတို့စိတ်ရင်းမှန်၊နွေးထွေးပွင့်လင်းသော၊ရွှင်လန်းသောအစာများကိုကြည့်ရှုပါ၊သူတို့ရဲ့ချစ်သူတွေ။ ဥရောပအမျိုးသမီးများ အများကြီးကောင်းအင်္ဂါရပ်များကို၊သင်အမှန်တကယ်နားလည်သဘောပေါက်လိမ့်မယ်၌သူတို့၏အိမ်ထောင်။ လူအပေါင်းတို့သည်အိပ်မက်တစ်ခု၏စံပြဇနီး၊ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်မထည့်သင့်စိတ်ကူးအသက်ရှင်ခြင်းသို့။ ဒါကြောင့်၊ဤသူကောင်းတဲ့အင်္ဂါကအောက်ပါနေကြတယ်:အခါလူအချို့စဉ်းစားပဲကျော်နိုင်ပုံကိုလက်ထပ်ထိမ်းမြားအတူယူရို၊သင်တက်ကြွတဲ့ဖြစ်။ ဥရောပမိန်းကလေးများအဘို့အစောင့်ဆိုင်းသင်အပေါ်အိပ်မက်။ သင့်ရဲ့ရာက္ၾသာအခန္း၏မင်းသမီး၊သင်မြင်ရပါလိမ့်မည်သောသူမိန်းကလေးများချက်ပြုတ်နှင့်ဆေးကြောသန့်စင်ဝမ်းမြောက်၊ချိုမြိန်ခြင်းနှင့်သင်ဖို့ကောင်း။ နေ့တိုင်းလာတဲ့အခါအိမ်များ၊သင်၏ချစ်ဇနီးချက်ပြုတ်ကြလိမ့်မည်တကယ့်အရသာရှိတဲ့ညစာစားဘို့။ အထူးမိန်းကလေးလိမ့်မည်စိတ်ဆိုးလျှင်မနှစ်သက်သူမ၏ယောက်ျားအတွက်မီးဖိုချောင်သို့မဟုတ်အိပ်ခန်း။ ပိုပြီးသည်အဘယ်သို့၊သင်ကြိုးစားနိုင်ပါအစားအစာ၏သင်၏မယားရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ကြီးမြတ်။ သင်ပင်ရန်မလိုအပ်ပါသွားဖို့အတွက်စားသောက်ဆိုင်အရသာအသစ်တစ်ခုခုနှင့်ထူးခြားဆန်းပြား။ အကောင်းကိုခံစားရပါလိမ့်မယ်သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်အတူထိုကဲ့သို့သောအမျိုးသမီးတစ်ဦး။ သင်သည်သင်၏အသက်တာမည်ဖြစ်ပြီးငြိမ်းချမ်းမှုနှင့်ရွှင်လန်း။ သူမ၏စောင့်ရှောက်မှုယူလိမ့်မည်သင့်ရဲ့ကလေးတွေနှင့်အလွန်ကောင်းစွာသင့်အိမ်မည်အပြည့်အဝအပြုံးများ။ ဇနီးမှဥရောပတိုက်၏အသက်တာဖြစ်စေမည်ပျော်ရွှင်ထက်သင်သည်အစဉ်အဆက်နိုင် မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ သင်သည်သင်၏လက်ထပ်ပြီးအသက်တာအပြည့်အဝဖြစ်လိမ့်မည်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်း။ ဘဝဆိုတာပျော်စရာရှိခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်သောခံစား၊ဒါကြောင့်မဖြစ်? ထိုသို့ဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်ပျော်ရွှင်ရင်ခုန်စရာ၊နှင့်ဥရောပမိန်းကလေးကိုကူညီလိမ့်မယ်သင်ရှိသည်ဖို့ပျော်ရွှင်ဘဝ။ အချိုအရပ်ရှည်ရှည်အမျိုးသမီးအပေါ်အိပ်မက်။ အရပ်ရှည်ရှည်ယူကရိန်းနှင့်ရုရှားမိန်းကလေးများအရမ်းလှစစ်မှန်သောအသက်တာ၌ဖြစ်ပုံထဲမှာသာရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။ ဝီမင်္ဂလာရှိ၏သောသူစုံတွဲများတွေ့အတူတစ်ဦးချင်းစီကတခြားအကူအညီနှင့်ဖတ်သူတို့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာပုံပြင်များ
အဆောက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များ၏ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ပြင်သစ်တစ်ဦးတစ်အဘို့အရှာဖွေနေတဲ့မေတ္တာဇာတ်လမ်းကြောင်းအဆင်းလှသောနှင့်ရေရှည်တည်တံ့။ ဒါဟာခက်ခဲနိုင်ပါတယ်နှင့်ရှုပ်ထွေးပွေလီ၊သို့သော်၊အတွေ့အညာဘက်ကိုလူတစ်ဦး:သူလက်ခံကြလိမ့်မည်အားလုံးသင့်ရဲ့အမှားသောသူမည် ဖြားသင်နေ့တိုင်းအသက်တာ၏ကြွင်းသောအရာလိုသူတစ်ဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အဖြစ်အချိန်အများကြီးသင်ပြုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန်အတွက်အတူတကွနှင့်ချစ်ကြောင်းသင်ပျော်မွေ့အဖြစ်အသစ်စုံတွဲ။ ဖန္တီးျခင္းအနက်ထားဆက်ဆံရေးအပြုအဆင့်အားဖြင့်အဆင့်၊နှင့်အတူခတ်၏လှုံ့ဆျောမှုကောင်းတစ်ဦးဆေး၏ခံစားချက်များ။ ဒီနေရာမှာငါတို့အကြံပေးချက်များသင်ကူညီမှရှာတွေ့အကောင်းဆုံးစာရွက်။ တည်ဆောက်ဖို့အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး၊အခြို့သောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆင့်များလိုအပ်သည်။ ကာလဖြစ်ခြင်း၏တစ်ခုတည်းသောကပ်ဆက်ဆံရေးအသစ်ပေးသည်၊သင်ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်အခွင့်သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်ပတ်သက်။ သင်အမှန်တကယ်လိုအပ်သလဲဆိုတာသိဖို့ပျော်ရွှင်ဖြစ်လိမ့်မည်? သင်ရှိပါကကွဲကွာ၊ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးပါကသင်ဘာလိုချင်မှအနာဂတ်ကိုအလေးအနက်ဆက်ဆံရေး။ စဉ်းစားဘယ်ခံစားချက်အတွက်ယခင်သင်ဆက်ဆံရေးမရှိတော့ကြုံခံစားရန်လိုမှုအနာဂတ်အတွက်၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ငြူသို့မဟုတ်ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့။ အဆောက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးသင်လိုအပ်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးရန်လက်ျာမေးခွန်းများကို။ ထိုကာလအတွင်းသင်သိမှရသင့်အနာဂတ်မိတ်ဖက်အဖြစ်လည်းကောင်းတစ်ချိန်တစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆန်းစစ်သုံးသပ်။ ယခုအချိန်ဖြစ်ပါသည် ကိုသွန်းအလင်းအပေါ်အယွင်းများ၏ယခင်ဆက်ဆံရေးအပေါ်ဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်သောတရားသူကြီးဖြစ်ဖို့အရေးအပါဆုံး၊သေချာစေရန်ဤအသစ်စိတ်ကူးယဉ်မှချွတ်ရရှိသွားတဲ့အလွန်အကောင်းဆုံးစတင်။ သင်ချင်အသက်ရှင်ရန်၊စုံလင်သောမေတ္တာဇာတ်လမ်း၊သင်တောင်းဆိုမှုများနှင့်ပတ်သက်စံကိုရွေးချယ်ခြင်းအတွက်အဖော်ဒီသည်။ သူကပြောပါတယ်၊အပြီးပြည့်စုံသောယောက်ျားမိန်းမမတည်ရှိပါဘူးနှင့်ဤရန်လိုအပ်ပါတယ်ပိုပြီးခွင့်လွှတ်ကြောင်းအချို့အချက်များပိုပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်အခြားသူများအပေါ်။ ဤသည်ကောင်းတစ်ဦးအချိန်အလုပ်အနည်းငယ်ကိုစာရင်းဖြစ်သည်၊သောသင်သတ်မှတ်ထားသာအမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်များကိုများအတွက်အနာဂတ်မိတ်ဖက်၊ဒါပေမယ့်လည်းစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊သင်ဖြစ်စေခြင်းငှါအဘို့အရှာဖွေနေရှိပါတယ်သူတစ်ဦးသည်လူမရှိကလေးများနှင့်အတူအဘယ်သူသည်ဘဝ၏တောင်ဘက်တွင်ပြင်သစ်။ ဆိုတဲ့အချက်ကိုသူက ဖြစ်စေခြင်းငှါတစ်ခုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့်အချက်မှ၊ဒါပေမယ့်ဘယ်မှာသူအသက်ရှင်တော်မူသည်အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုဖွင့်ဖို့ပြောင်းလဲမှုနှင့်အများကြီးပိုပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၊အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုသင်ခွဲခြားနိုင်အဖြစ်။ ဒီရိုးရှင်းတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းများလိမ့်မည်အထူးသဖြင့်အသုံးဝင်သောအတွက်ကူညီပေးတည်ထောင်ရန်တစ်ဦးအစိုင်အခဲ အခြေခံအုတ်မြစ်အတွက်အနာဂတ်တစ်ခုအလေးအနက်ဆက်ဆံရေး။ ရှိခြင်းအရေအလိုဆန္ဒဆောက်လုပ်ဖို့ရေရှည်တည်တံ့သောဆက်ဆံရေးဒဏ်ငွေဖြစ်ပါသည်၊ဒါပေမယ့်အများကြီးပိုကောင်းပါတယ်အတိအကျဘယ်လိုသိနှင့်၊အကောင်းဆုံးကတော့၊အဘယ်သူနှင့်အတူ။ အဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေအသုံးဝင်လိမ့်မည်ကာလအတွင်းဖန်တီးမှုသင့်ကြော်ငြာအပေါ်အဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှု၏။ ပြီးနောက်ပထမဦးဆုံးဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်နှင့်အနည်းငယ်ဖလှယ်မည်၊စတင်စဉ်းစားရန်ဆက်ဆံရေးအခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်ဖြစ်လာမှအလေးအနက်နှင့်ရေရှည်တည်တံ့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးရန်ဆန္ဒရှိနေတယ်ဆိုရင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်မှုတည်ဆောက်ရန်ဤဆက်ဆံရေး။ ကျနော်တို့အကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ပေးခြင်းအတွက်အရာအားလုံးကိုသင်သည်သင်၏သစ်ကိုမိတ်ဖက်လိုမဟုတ်ဘဲအကြောင်းစဉ်းစားရန်စတင်အဖြစ်အပျက်နှင့်အတူတစ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်။ သတိရတဲ့ဆက်ဆံရေးလုပ်အပေးအယူနှင့်အချို့သောအချိန်ယူအားလျော်စွာအတူတကွ။ ဖြစ်နိုင်အောင်အသက်ရှင်နေထိုင်၊ဒါကြောင့်လည်းအရေးပေးရဖို့တစ်ဦးဆက်ဆံရေးအချိန်။ အများအပြားရှိပါတယ်ပျက်ကွက်သူအများ၊တစ်ခါတစ်ရံကြီးလွန်းလျင်မြန်စွာအတူတကွနေထိုင်အဖြစ်စုံတွဲတစ်တွဲအခါ၊ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ပေးသင့်သူတို့ကိုယ်သူတို့ပိုပြီးအခွင့်အလမ်းသက်သေပြဖို့သောဆက်ဆံရေးနိုင် အလုပ်လုပ်ရန်ဖန်ဆင်း။ ယူဝံထူထောင်ဥတုယုံကြည်မှု၊အဆောက်အဦအုတ္ျထာင္ဘက္ႏစုံတွဲတစ်တွဲအဖြစ်၊လေ့လာသင်ယူဖို့အားလုံးသိကြောင်းအသီးအသီးအခြားနှင့်ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရင်းနှီးဒါေတြအားလံုးကအဆင့်များလိုအပ်ကြောင်းသည်းခံခြင်းနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ။ ကြာဝေးထက်ပိုပြီးတစ်နေ့သို့မဟုတ်နှစ်ခုကိုနားလည်ဖို့ခဲ့ကြလျှင်သင်သည်နှစ်ခုစလုံးအလုပ်မှအတူတကွနေထိုင်။ အခွန်၏မေတ္တာသာသိသာလာသောရေရှည်အတွက်ကြောင့်’အခါမေတ္တာသည်ပဋိသန္ဓေ၊အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်အခြေခံအုတ်မြစ်သင်သည်သင်၏အသက်တာ၏'(ဒေးဝိ)။
© 2020 ဗီဒီယိုက ချက်တင် ပြင်သစ်